ကနျ့သတျခကျြမရှိ – MM Republic
အဲ့ဒီ မနကျက…အိပျမကျကောငျးမြားနှငျ့ ထိတှခွေ့ငျးကငျးခဲ့သညျမှာ ကွာပွီဖွဈသောမညျကာမတ်တအိပျစကျ ခွငျးတဈခုမှ ပငျြးရိညီးငှစှေ့ာနိုးထခဲ့မိသညျ…။ ဖွဈနကေမြနကျခငျးကလညျး ထုံးစံအတိုငျး အေးတိ အေးစကျနှငျ့ပေါ့ … ဘေးနားတှငျရံဖနျရံခါရှိခဲ့ဖူးသော အနှေးဓါတျလေးတဈခုအား မရှိနိုငျမှနျးသိရကျနှငျ့ စမျးဖွဈအောငျစမျး လိုကျမိသေး၏၊ အေးစကျသောအတှရှေိ့သညျ့သူ့မကျြမှနျကိုသာစမျးမိလိုကျသညျ၊ သူအရှကျပွကေောကျတပျလိုကျ၏၊ အမှနျတဈကယျ သူထိတှခေ့ငျြခဲ့သညျမှာနုထှေးအိစကျလှစှာသောခဈြ သူ၏ ခန်ဓာကိုယျပငျဖွဈပတေော့သညျ။ `လှမျးစရာရှိလြှငျ နာစရာနှငျ့ ဖွရေသညျ´ ဟူသညျ့စကားရှိသျောလညျး လှမျးစရာကွုံလာ တိုငျးနာကညျြးစရာကို သူရှာမတှခေဲ့မိပါ၊ တဈကယျတမျး နာကညျြးစရာမြားလုပျခဲ့သူက သူကိုယျ တိုငျ ဖွဈနခေဲ့သညျလေ။ သူ့ကို ` မ´ ထားရဈခဲ့သညျမှာ တဈနှဈပငျ ပွညျ့ခဲ့ပါပွီ၊ထားခဲ့သညျ ဆိုခွငျးထကျ စိတျပကျြရှံမုနျးစှာ စှနျ့ခှာသှားသညျဆိုခွငျး က ပိုမှနျပလေိမျ့မညျ ။
အားလုံး ပွီးသှားခဲ့ပါပွီ မောငျရယျ´ လို့သူမ ပွောခဲ့သျောလညျး ခုခြိနျထိအောငျ သူ့ရငျ ထဲက ထှကျခှာသှားခွငျးမရှိသေးပါ သူမနှငျ့တှဆေုံ့ရငျးနှီးခှငျ့ရခဲ့သညျ့ အခြိနျမြား၊ အကွညျ့ခငျြးဆုံ ရငျခုနျလှိုကျမော လူငယျတို့ဘာသာဘာဝ ခဈြကွိုးသှယျခဲ့သညျ့ ကာလမြား၊ ရညျးစားသကျကွာ လာသညျနှငျ့အမြှ သူမ၏ ကိုယျပိုငျတိုကျခနျးကလေး၌ ပါးခငျြးအပျ ရငျခငျြးကပျ၍ ခဈြရညျ လူး ခဈြနယျကြူး ခဲ့ကွသညျ့ အခြိနျမြားက ကပျပါးမှိုပငျမြားသဖှယျ သူ့ရငျမှာ တှယျကပျ ငွိတှယျနေ ကွဆဲဖွဈ၏။ အသညျးပုံစားပှဲတငျနာရီလေးကို ကွညျ့လိုကျတော့ အခြိနျက ၇နာရီ၃၀အတိ၊ ရုံးသှားရနျ အခြိနျနီးကပျလာပပွေီ၊ အိပျပုတျကွီးတဲ့မောငျ့အတှကျဟု နာရီမှနျပျေါတှငျ စီဒီမာကာပနျဖွငျ့ ရေး ထားသညျ့ ခဈြသူ၏လကျရေးလှလှလေးမြားက မှိနျဖြော့ဖြော့အျော … ကွာခဲ့ပွီပဲလေ မောငျ့ကို လှမျးရငျဖွစေရာ နာကညျြးစရာလေးမြား ပေးပါအုံးလား `မ´ရယျ …၊ သူ ကုတငျပျေါခွဆေငျးထိုငျရငျး တှဝေမေိနသေေး၏။
ပွီးမှ ဖွဈနကြေ ဂယောကျဂရကျ အတှေးမြားကိုသကျပွငျးတဈခကျြဖွငျ့မှုတျထုတျဖယျရှားကာမနကျတိုငျးလုပျနကေတြဈကိုယျရေ သနျ့ရှငျးမှုမြားအား အစီအစဉျမကစြှာ သုတျသီးသုတျပွာဖွငျ့ ဖွေ ရှငျးပွီး ဘတျ(ဈ)ကားမှတျတိုငျ သို့ထှကျခဲ့သညျ။ ကားမှတျတိုငျရောကျသညျ့တိုငျ အလုပျကိစ်စ ဝယောဝတျစမြားကမပွီးသေး ၊ ဒီနအေ့ပွီးအပျ ရမညျ့ ဆေးစာရငျးမြားအား နရောလှတျတဈခုတှငျထိုငျ၍ စဈနမေိ၏။ ထိုစဉျအကြှမျးတဝငျရှိခဲ့ ဖူးသညျ့ရမှေေးနံ့တဈခုကို ရှုရှိုကျမိသညျ။ “မောငျလေး .. နမြေိုး´´ သူ့ရှမှေ့ချေါသံတဈခုကွောငျ့ မကျြမှောငျကွုပျမိသညျ၊ ဒီရပျကှကျသို့သူပွောငျးလာသညျ မှာကွာပွီဟုဆိုနိုငျသျောလညျးသူ့အားနုတျဆကျချေါပွောသူ မရှိခဲ့ဖူးပါ ၊ နာမညျခငျြးတူလို့မြားလား သူ နဝတေိမျတောငျဖွငျ့ မော့ကွညျ့မိ၏ ၊ ပထမဆုံးမွငျလိုကျရ သညျက… ဘျောငှရေောငျဒေါကျ မွငျ့ဖိနပျစီးထားသညျ့ ခွထေောကျလှလှတဈစုံ၊ ဒုတိယ ပွညျ့သောပေါငျတံ ကဉျြးသောခါး။
ထှားသော ရငျအစုံတို့ကို အနကျဘကျသနျးသညျ့ ပါတိတျဝမျးဆကျဖွငျ့ တငျးရငျးခပျြရပျစှာ ဆငျမွနျး ထားသညျ့ခန်ဓာကိုယျ၊ တတိယ သှယျလြှသောမေးရိုး တိရိသပျရပျ၍ ပွုံးယောငျသနျးနေ သညျ့ ယဈမူးဖှယျနုတျခမျးပါးတဈစုံ စူးရှ၍ အရညျလဲသောမကျြဝနျးနကျနကျ တို့ဖွငျ့တနျဆာဆငျ အပျသော အမြိုးသမီးတဈဦးး …..။ သူ့အမွငျအာရုံတို့ မူးနောကျဝေဝါးလာကာ နှလုံးသှေးမြားငယျထိပျသို့ ဒိနျးခနဲ တကျ ဆောငျ့သကဲ့သို့ခံစားလိုကျ ရသညျ၊ သူအကွညျ့ကိုခကျြခငျြးလှဲဖယျမိ၏။သူ့ခံစားခကျြကို ထိုအမြိုး သမီးလညျး ခံစားသိရှိပလေိမျ့မညျ၊ သူမနုတျခမျးတှေ မသိမသာတုနျနသေညျကိုသတိထားမိ၏။ “ခငျဗြားးး….´´ သူ့စကားသံတို့က ဘီလူးစီးခံရသူကဲ့သို့ တိမျဝငျသှားသညျ အမြိုးအမညျမသိသညျ့ ဆိုးရှားလှသော တှဆေုံ့မှုတဈခုပေ၊ သူမကိုတှမွေ့ငျလိုကျရ သညျမှာ သူရဲသူဘကျတဈကောငျရှေ့ မှောကျ ရကျလဲနသေူကဲ့သို့ ထိတျလနျ့ ရှံ ရှာဖှယျကောငျးလှသညျ။
တဈကယျတမျး သညျ့ထကျဆိုး ခဲ့သညျကိုတော့ ခငျဗြားကိုယျတိုငျသိခဲ့မှာပါ နုနုဇငျ။ “မောငျလေးကိုတှလေို့ကျလို့ နုတျဆကျတာပါကှယျ နု တောငျးပနျစရာလညျးရှိလို့ပါ´´ သူမ၏ မကျြနှာလှလှအား သူဆကျခနဲကွညျ့မိသညျ။ မကျြလုံးမှမီးတောကျမြားလြှံကလြာမ လားမပွောတတျ၊သူ့အကွညျ့ကွောငျ့ နုနုဇငျမကျြနှာလေးပိုငယျသှာသညျ။ “ဒေါကျတာမမကွီးရယျ ခငျဗြားခှဲပေးလိုကျလို့ ကြှနျနျောတို့အသညျးတှေ ဟတျတကျကှဲ ခဲ့ပွီးမှတောငျပနျမလို့လား ခငျဗြားပွလိုကျတဲ့ပညာခနျးတှကေို ခငျဗြားကိုယျတိုငျသိပါတယျ မငျးသမီးရှုံးလောကျပါရဲ့ ခငျဗြားကွောငျ့ `မ´ဘယျလောကျခံစားခဲ့ရလညျး .. ထားပါ ကြှနျနေျာ့အ ပွဈလဲမကငျးပါဘူး ခငျဗြားကွောငျ့ရယျလို့ တဖကျသကျမပွောတော့ပါဘူး အားလုံးပွီးသှားပွီ ဇာတျသိမျးခနျးရောကျမှ ကြေးဇူးတငျကွောငျး စာတမျးထိုးမနနေဲ့တော့ဗြာ ခငျဗြားတောငျးပနျတာရှုံး တဲ့လူကို ကွေးတံဆိပျနဲ့လာနှဈသိမျ့နသေလိုပဲ ပိုပူလောကျတယျ´´ သူ့အသံအနညျးငယျကယျြသှားသညျ။
ပတျဝနျးကငျြမှလူမြားကှကျကွညျ့ကှကျကွညျ့လုပျ လာကွ၏၊ နုနုဇငျခေါငျးငုံ့ထားသညျ။ “ဆောရီးပဲ ခငျဗြားနားမလညျခဲ့ပမေယျ့ ကြှနျနျောကတော့မိနျးမတဈယောကျရဲ့အရှကျနဲ့ သိက်ခာကိုနားလညျတယျ ဒီလောကျနဲ့တျောရအောငျဗြာ ဒေါကျတာကတော့ဘတျဈကားမစီး လောကျပါဘူး ခငျဗြားကားဆီပွနျသှားပါတော့ ကြှနျနျောလညျးသှားတော့မယျ´´ “နုက မှတျတိုငျနောကျကဆေးခနျးမှာပါ မောငျလေးကိုမွငျလိုကျလို့ပါ နုပွောစရာတှေ ရှိတယျ မငျးနားထောငျသငျ့တယျ´´ သူလကျကာလိုကျသညျ၊နုနုဇငျပွောလကျစစကားမြားတနျ့သှား၏ “တျောပါဘီ ဒေါကျတာ ကြေးဇူးတငျပါတယျ ထပျပီးဒုတျခမပေးခငျြပါနဲ့တော့ သှားပါရစေ တော့ဗြာ´´ ထိုစဉျ ရပျလာသညျ့ဘယျနံပါတျမှနျးမသိသောကွုံရာကားပျေါသို့ပွေးတကျခဲ့မိသညျ ။နုနုဇငျ ၏“ဒီကိစ်ခက မငျး မမ ရဲ့စနကျမကငျးဘူးဆိုရငျရောကှာ´´ဟူသညျ့အသံသဲ့သဲ့တို့ကနျြခဲ့သညျ။
သူကားပျေါရောကျသညျ့တိုငျ ထူပူနဆေဲဖွဈ၏ ၊နုနုဇငျ၏စကားမြားက နားထဲပဲ့တငျထပျနေ သညျ၊ခေါငျးကိုတှငျတှငျရမျးမိသညျ။ သညျမိနျးမလီဆယျပွီှးပွောတာ၊`မ´တှငျဘာအပွဈမှမရှိ တဈ ကယျအပွဈ ရှိခဲ့သူက သူကိုယျတိုငျပါ။ စောငျ့ထိနျးနိုငျမှုမ ရှိခဲ့တဲ့ဒီကောငျပါ။ရုံးရောကျတော့ မကျြနှာပကျြနသေေးသညျ့သူ့အား လုပျဖျောကိုငျဘကျမြားက သတိထား မိကွသညျ။ စပျစုခွငျးတော့မရှိကွ သူမကျြနှာပကျြလာတာ ပထမဆုံးအကွိမျမှမဟုတျတော့ဘဲလေ။ သူ့ထိုငျခုံတှငျထိုငျ၍ တှတှေကွေီးစဉျးစားနမေိသညျ၊သူမှားခဲ့ပါသညျ မှားခဲ့သလောကျ လညျးဆုံးရှုံးခဲ့ အရှကျရခဲ့ပါသညျ၊ သညျဇတျလမျးကို မခေ့ငျြယောငျဆောငျထားခဲ့သညျမှာလညျး ကွာခဲ့ပါပွီ၊ သို့ပမေယျ့ နုနုဇငျ၏ စကားတဈခှနျးကွောငျ့ဖွဈခဲ့သမြှအား ပွနျလညျသုံးသပျရပေ ဦးတော့မညျ ….။ သူနှငျ့သူ့အခဈြဆုံး`မ´တဖွဈလဲ ဒေါကျတာလဲ့လဲ့ဖွူ တို့၏ဇာတျလမျးမှာ အပြျောဖတျ အခဈြ ဝတ်ထုမြားကဲ့သို့ဆနျးပွားမှု မရှိခဲ့ပါ။
ဆေးကုမ်ပ်ပ်ပဏီတဈခုမှသာမာနျအရောငျးမွှငျ့တငျရေးဝနျထမျးတဈဦးနှငျ့ ပုဂ်ပလိကဆေးရုံတဈခုမှအလုပျသငျ ဆရာဝနျမလေးတဈဦးတို့၏ ရိုး ရှငျးသညျ့ အခဈြဇာတျလမျးလေး တဈခုသာဖွဈပါသညျ၊ အဆငျ့အတနျးခငျြး မတူညီသညျ့တဈ ခကျြသာပွောစရာရှိခဲ့၏။ ယငျးကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ သူတို့နှဈယောကျအကွားတှငျပွသနာဟုမယူဆခဲ့သညျကို မကျြဝနျးခငျြးငွိ အကွညျ့ခငျြး ဖ လှယျ ခဈြကွိုးသှယျမိကွကတညျးက နှဈဦးစလုံး နားလညျသိရှိခဲ့ကွပွီးဖွဈပါသညျ၊ သူ၏ ရိုးသားကွိုးစားမှုနှငျ့အရညျ အခငျြးကို `မ´က ယုံကွညျသကဲ့သို့ သူကလညျး မ၏ အဆငျ့အတနျးနှငျ့ဂုတျသိက်စ်ခာတို့အား လေးစားခဲ့ပါသညျ။ သူတို့နှဈယောကျအကွား အခဈြတဈခုသာခွားနားထား၏၊ ရငျ့ကကျြပွီးခတျေ ပညာတတျလူငယျနှဈဦး၏ ခဈြခွငျးက ဆယျကြျောသကျစုံတှဲမြားကဲ့သို့ ကနျ့သတျခကျြ မရှိ ပှငျ့လငျးခဲ့ပါသညျ၊ မိဘမြားမှာ နယျမွို့လေးတဈမွိုတှငျနထေိုငျ သညျ့အလြောကျ။
ရနျကုနျတှငျ တိုကျခနျးငှား၍ တဈကိုတညျး နသေော `မ´၏အထီးကနျြမှုမြား အား သူ့အခဈြ ဖွငျ့ ပွညျ့စုံစခေဲ့သညျ၊ `မ´ကလညျး သူမထကျအသကျငယျသညျ့ သူ့တောငျးဆိုမှုမှနျသမြှအား ငွငျးဆနျ ခွငျးမရှိခဲ့ပါ၊ ထိုမြှ အပေးအယူတညျ့ခဲ့သညျ့ ခဈြသူနှဈဦး၏ ပထမဦးဆုံးညအား ငှရေောငျပိတျကားတှငျ နောကျပွနျရဈ ကွညျ့သကဲ့သို့ ပွနျ လညျမွငျယောငျမိပါသေးသညျ…။ အဲဒီ ညက … ။ မစှသေျောလညျး သညျးသညျ့ရနျကုနျမိုးက သူတို့နှဈဦးကိုနီးစပျမှုမြား ပိုမိုဖွဈတညျစခေဲ့သညျ၊ သူ့တဈကိုယျလုံးရှဲရှဲစိုနေ သညျ့တိုငျ `မ´ကတော့ခွောကျခွောကျသှသှေ့ရှေိ့နခေဲ့၏၊ မေးတဂတျဂတျဖွငျ့ ကားမောငျးနသေောသူကို ပွုံးပွုံးလေး ကွညျ့နသေညျ။ မ မောငျခမျြးနဘေီနျော ပွနျလြျောပေးရမယျ မိုးရှာရငျကားမမောငျးရဲဘူးဆိုလို့ ဆေးရုံကိုမိုးစိုခံပီးလာခဲ့ရတဲ့ခွကွှေခ ရယျ၊ ခမျြးခမျြးနဲ့ကားမောငျးပေးရတဲ့ဝနျဆောငျခရယျ ၊ ပီးတော့မိုးစိုစိုနဲ့ပွနျရမယျ့ အပွနျစရိတျရယျ သုံးခုနျော။
အျော… မောငျရယျ မောငျမကိုဘယျလောကျခဈြလဲလို့ တဈခါလေးစမျးကွညျ့မိပါတယျ လြျောကွေးတှေ တောငျးနေ လိုကျတာ အဲ့လိုကွေးလား မောငျက မကျြစောငျးခြိုခြိုလေး တဈခကျြထိုးရငျးပွောသညျ၊ နုတျခမျးထူထူလေးမြားကိုလညျးစူထား၏၊ နုတျခမျးနီဆိုးမထား သျောလညျးပနျးရောငျသနျးနသေညျ့ `မ´နုတျခမျးလေးမြားက နမျးစုပျခငျြစရာကောငျးအောငျလှနသေညျ။`မရပါဘူးဗြာ .. မ တို့တောငျ စမျးသပျခယူသေးတာပဲ မောငျလဲယူရမှာပေါ့ ခဈြသူခငျြးလဲမရပါဘူးနျော စပါးက တော့ပေါကျဈေးပဲဗြ´`စကားသိပျတကျတယျ လူလညျကွီး .. ဟုတျပီလေ ဒါဆိုလဲ ဝနျဆောငျမှုတော့အပွညျ့ပေးနျော မ ကကွိုကျ မကွိုကျ ကွညျ့ရအုံးမှာ´`အိုခေ ..ဝနျဆောငျမှုကတော့အာမခံတယျ အပွညျ့အ၀ ပေးမှာ ကောငျးလှနျးလို့ ခွမေလေးကို ကုပျသှားစရေမယျ သိလား မ´´ သူ့အပွောကွောငျ့ `မ´ပါးမို့မို့လေးမြားတှငျ ရှကျသှေးတို့ နီမွနျးသှား၏။ သူ့ပခုံးပျေါလကျသီးဆုပျ နုနုလေးမြားအဆကျမပကျြကလြာတော့သညျ။
အာ့ .. လူညဈပတျကွီး .. ဘာစကားတှပွေောမှနျးမသိဘူး .. ကဲ ..ကဲ´´ တဈကယျတမျး နုတျအားဖွငျ့ အထအေ့ငေါ့ လေးမြား ပွောဆိုနကွေသျောလညျး ထိုအခြိနျအထိ လှနျလှနျကြူးကြူးမရှိ ကွသေးပါ၊ မ ဆေးရုံအပွနျတှငျ သူကားမောငျး၍ လိုကျပို့မွဲဖွဈသျောလညျး ရိုးရိုးသားသားပငျဖွဈသညျ လိုကျပို့ပွီးသညျ နှငျ့သူပွနျလရှေိ့၏၊ သညျးသညျးမဲမဲရှာနသေညျ့မိုးကိုသာအပွဈဖို့ရပတေော့မညျ၊ မ ၏တိုကျခနျးရှရေ့ောကျသညျအထိ မိုးကမစဲနိုငျသေး၊ ကား စကျသတျပွီးသညျနှငျ့ မ ကသူ့ကိုထီးတဈလကျကမျးပေးသညျ။`ရတယျ မ မောငျကစိုပွီးသား `မ´ သာလုံအောငျဆောငျး´`အှနျ့ ဘယျလိုလဲ အပွညျ့အ၀ ဆို ဆောငျးပေးလေ ဟှနျ့ .. မကွိုကျတော့ဘူးနျော ဒီဒရိုငျဘာတော့´´ မ ကမခြိုမခဉျြမကျြနှာပေးဖွငျ့ဆိုသညျ၊ သူ့ရငျထဲယားကြိကြိဖွဈသှား၏။ `ကဲပါဗြာ ဟုတျပါဘီ လုပျပေးရမှာပေါ့ ကဲပေး´ မ ဆီကထီးကို ယူလိုကျပီး သူမ ကားထဲကထှကျသညျအထိဆောငျးပေးသညျ။
ကားတံခါးပိတျသညျအထိစောငျ့နလေိုကျ သေး၏၊ ပွီးမှထီးကိုပိတျ၍ ပွေးလတေော့သညျ၊ ကားရပျသညျ့နရောနှငျ့လှကေားကလညျးဝေးလတေော့ သူမ ပွေး ဝငျရနျအခှငျ့မသာပေ၊သူမအငိုကျမိသှား၏၊ ရှာလသေောမိုးစကျတို့က မ ၏ စပနျ့သားပှငျ့ရိုကျဝမျးဆကျပါးပါးလေး ပျေါသို့ ဒလဟောစိမျ့ဝငျကာ ရှဲရှဲစိုစတေော့သညျ။ အရောငျကလညျးနို့နှဈရောငျဖွော့ဖွော့ဖွဈသညျ့အတှကျ အတှငျးခံဘရာ လေးမြားပငျ တှမွေ့ငျနရေသညျ။ “အား .. မောငျရေ စိုကုနျဘီကှာ ထီးပွနျပေးလို့ဆို၊ မစတော့ဘူး တဈကယျစိုကုနျဘီကှာ ငိုမှာနျော´´ မ သူ့နောကျသို့ပွေးလိုကျ၍ ထီးကိုလုသညျ သူကလှတျအောငျပွေး၍ တိုကျခနျးလှကေားတှငျစောငျ့နေ၏၊ သူမ ခွကေို စောငျ့၍ လှကေားတံစကျမွိတျသို့ဝငျလာတော့သညျ၊ ပါးစပျမှလညျး သူ့ကိုတတှတျတှတျဖွငျ့ ကြိမျဆဲလာ၏၊ တဈကိုယျလုံး ရှဲရှဲစို နသေဖွငျ့ အကွိုအကွားမြားအထိကပျဝငျနသေညျ့ စပနျ့သားပြော့ပြော့က။
သူမ၏ ခန်ဒာကိုယျအလှ ကွှကွှရှရှမြား အားဖုံးကှယျနိုငျစှမျးမရှိကွတော့ပါ ၊ပှဖေ့ကျနမျးရှုံ့ခဲ့စဉျမြားတှငျ သူစမျးမိခဲ့သမြှ ဘရာထူထူမဝတျတတျသော တဈလုံးစီသီးခွား ဖွဈနသေညျ့ မ ၏ရစေိုရငျ သားမို့ မို့မြား၊ ခန်ဒာကိုယျ လုံး၍ပွညျ့သော ကွောငျ့ အတနျငယျဝသညျဟုထငျရသျောလညျး ခပျြရပျ၍ ခကျြပေါကျရာ အ ခြိုငျ့လေးအထိမွငျတှနေ့ရေသညျ့ ဗိုကျသားနုနုမြား၊ ၁၀ကြျောသကျအရှယျကတညျးက ထမီကိုသာစှဲစှဲမွဲမွဲဝတျခဲ့ပါသညျ ဟုဆိုခဲ့သညျ့အတိုငျး ပွညျ့တငျးသောခန်ဒာကိုယျနှငျ့အခြိုးညီစှာ သေးကဉျြးနသေညျ့ခါး ဌငျးနှငျ့တဈဆကျတညျးတှငျ အစ ၌ပွပွေဈသယောငျရှိသျောလညျး အောကျသို့လုံး၍ ကားသှားသညျ့ သူ့အကွိုကျ တငျသားထှားထှားတို့ဖွငျ့ မွငျမ ကောငျးလောကျအောငျလှနတေော့သညျ။ “ကဲ .. ဘယျလိုလဲ ခုမှ လှသှားတာမဟုတျလား´´ သူကရစေိုနသေောမကျြမှနျကိုသုတျရငျးမေးလိုကျသညျ။ သူခနဲ့တဲ့တဲ့ဆိုတော့ မကသူ့ရငျဘတျကို လကျဖဝါးနှဈဖကျဖွငျ့ တဈဗနျြးဗနျြးရိုကျလတေော့သညျ။
နာသညျမဟုတျသျော လညျးသူ နာခငျြယောငျဆောငျ၍ လကျလေးမြားကိုဖမျးကိုငျကာ တဈကိုယျလုံးသိမျးကွုံး၍ ဆှဲဖကျပွဈလိုကျ၏၊ သူ့ရငျ ဘတျကယျြကယျြတှငျ မ ၏ လုံး၍စူနသေညျ့ အိစကျစကျရှရေငျနှဈမှာမှာ ပိပွား၍ကပျသှားတော့သညျ။`အို့ .. ဟိတျ .. မောငျ .. လူတှမွေငျကုနျမယျ လှတျပါကှယျ´ မကျြနှာလေးငယျ၍ တောငျးပနျနသေညျ့အတှကျ သူနှမွောစှာလှတျပေးလိုကျရသညျ၊ အမှနျဆို လှကေားရငျးကမှောငျနေ ပါသညျ၊ မကသူ့ရငျမှရုနျးထှကျ၍ လှကေားပျေါသို့ဦးဆောငျတကျသှားတော့သညျ၊ သူကနောကျမှကပျလိုကျသှား သျောလညျး လှကေားနှဈထဈစာကွောနသေညျ့ မ၏နောကျပိုငျးအလှက သူ့မကျြနှာရှတှေ့ငျ အနှောငျအတှယျမဲ့စှာလှုပျ ခါနတော့၏၊ သူသိသလောကျ အတှငျးခံအား လိုအပျသညျ့နရောကိုသာဖုံးသညျ့ ကွိုးတဈခြောငျးဘောငျးဘီကိုသာ ဝတျ လရှေိ့သော မ ၏ ရစေိုတငျသားအလှမြားက သူ့အမွငျအာရုံကိုအထှဋျ အထိပျသို့ရောကျစခေဲ့သညျ။
သူ့မကျြလုံးတှေ ဘယျဆီရောကျနသေညျကို တံခါးသော့ဖှငျ့ပီး သူ့ဘကျလှညျ့လာသော မ ကတှသှေ့ားဟနျတူပါသညျ၊ နုတျခမျးဒေါငျ့လေးအနညျးငယျကှေးညှတျသှားသညျမှအပ ထူးခွားဟနျမပွဘဲ မသိကြိုးကြှနျပွုကာ ဝငျသှားနှငျ့၏။ သူအခနျးထဲ ဝငျလြှငျဝငျခွငျး တဈနခေ့ငျးလုံး ပိတျလှောငျထားခဲ့ဟနျတူသော တိုကျခနျး၏ ရနံ့နှငျ့ အနှေးဓါတျကိုရသညျ၊ ထိုအနှေးဓါတျက မိုးစိုထားသညျ့သူ့အား အတနျငယျနှေးထှေးသှားစသေျောလညျး မ ဖှငျ့လိုကျသညျ့ ဝရနျတာတံခါးမှဝငျ လာသညျ့ လစေိမျးမြားကွောငျ့ ပွနျလညျအေးစိမျ့လာသဖွငျ့ ဆိုဖာပျေါတှငျ ကုပျကုပျလေးထိုငျနမေိသညျ။ “သိပျခမျြးနလေား .. မောငျအေးမှာစိုးလို့ အဲကှနျးမဖှငျ့ဘဲ တံခါးဖှငျ့လိုကျတာ၊ခနလေးစောငျ့ အဝတျလဲပီးပွနျလာခဲ့မယျ ခမျြးနတေယျဟုတျ .. ကျောဖီဖြျောခဲ့မယျနျော´´ သူမေးဆကျပွလိုကျသညျ၊ အိမျရှစေ့ားပှဲတှငျ စာအုပျမြားပွနျ့ကြဲနေ၏၊ အားလုံးလိုလို အင်ျဂလိပျဘာသာဖွငျ့ရိုကျနှိပျ ထားသော ဆေးဘကျဆိုငျရာစာအုပျအထူကွီးမြားဖွဈ၏။
တဈအုပျကောကျယူကွညျ့လိုကျသညျ၊ မိနျးမအင်ျဂါပုံ မြား သားအိမျပုံမြားကို ဓါတျပုံမြားဖွငျ့အသေးစိတျဖျောပွထားသညျ့စာအုပျဖွဈ၏၊ မ ကအိုဂြီလိုငျးကိုယူထားသဖွငျ့ ထိုစာအုပျ မြားလလေ့ာရပလေိမျ့မညျ။ မ တဈယောကျ စာသညျလောကျဖတျရသညျ့တိုငျ သူ့လိုမကျြမှနျမတကျရသေးပေ။ “ဟိတျကောငျလေး .. ဘာတှလြေောကျကွညျ့နတောလဲ တဈအားကိုစိတျဝငျစားနတေယျနျော ဟှနျ့ .. မပွောခငျြဘူး´´ သူရယျကြဲကြဲဖွငျ့စာအုပျကိုပိတျသညျ၊ မကသူ့ကျောဖီခှကျကို ကမျးပေး၏၊ အိမျနဂေါဝနျ ခပျဖားဖားကိုဝတျ လာသညျ့ မ၏ ဟိုကျကသြှားသညျ့ လညျပငျးအဟ ကို ကွညျ့ဖွဈအောငျကွညျ့မိလိုကျသေးသညျ၊ ခန်ဒာကိုယျအငိုကျတှငျ အနှောငျ အတှယျမဲ့စှာ ပုံကလြာသညျ့ ရှရေငျနှဈမှာ၏အထကျပိုငျးကို လညျပငျးအဟိုကျမှ ကောငျးစှာမွငျလိုကျရ၏။ သူမ ဘရာ ဝတျမလာသညျမှာသခြောသညျ။ သူ့ဘေးတှငျ ဂါဝနျစလေးကို သိမျရငျးဝငျထိုငျသညျ၊ စပယျရနံ့ကိုရလိုကျ၏။
မကသူမအတှကျယူလာသညျ့ ကျောဖီကိုတဈငုံသောကျလိုကျသညျ၊ အကြီရငျဘကျတှငျ အသီးခေါငျးသေးသေးလေးနှဈခု အတနျငယျ ခြှနျထှကျ နသေညျ ကိုကွညျ့ခွငျးအားဖွငျ့ ဘရာပါမလာသညျကိုထပျမံအတညျပွုနိုငျခဲ့၏၊ မ သတိထားမိသှားပွနျ သညျ၊ ကျောဖီခှကျကိုခြ၍ မလုံလဲစှာလကျကို ပိုကျလိုကျသညျ၊ ပွီးမှမကျြစောငျးခြိုခြိုလေးဖွငျ့ … `ကဲ .. ကိုယျတျောလေး .. ဒီနဘေ့ာဖွဈနလေဲ ..ကျောဖီမွနျမွနျသောကျပီးပွနျတော့ နောကျကနြဘေီ ဆကျနရေငျ မတဈကိုယျလုံး ခရမျးလှနျရောငျခွညျသငျ့တော့မယျ မငျးရဲ့မှနျဘီလူးကွီးကထှကျတဲ့ ဗို့အားတှပေငျြးလှနျးလို့´ မပွောလညျးပွော ခိုးခိုးခဈခဈနှငျ့ရီသညျ၊ သူမရီသညျ့အခြိနျ တှယျရာမဲ့ရငျနှဈမှာကသိမျ့သိမျ့ခါပွနျလေ၏၊ သူမကျြလုံး အစုံ ကိုမှိတျလိုကျသညျ။ ဘယျကထှကျ နသေညျ့အပူရှိနျကွောငျ့လဲမသိ သူ့ရစေိုအဝတျမြား ခွောကျသှေ့ ခငျြခငျြဖွဈ နသေညျ ။ခြှေးစို့ခငျြသလိုလိုဖွဈလာ၏၊မှနျးကွပျမှုမြားအားဖှငျ့ထုတျလိုကျခငျြသညျ၊ကွာရငျခကျတော့မညျ။
မောငျပွနျလိုကျတော့မယျ မရယျ သူသကျပွငျးကိုခသြညျ၊ ပွီးတော့မကျတပျထရပျလိုကျ၏။မ ပွုံးပွီးကွညျ့နရောမှ သူ့လကျကို ဖမျးဆုပျလိုကျသညျ၊ သာသာလေးပမေယျ့ နုညံ့နှေး ထှေးလှစှာသော လကျအစုံ၏ ဆုပျကိုငျမှုကိုရုနျးရနျအငျအား တဈကယျကိုမရှိခဲ့ပါ၊ သူပွနျထိုငျလိုကျသညျ။ “နပေါအုံး မောငျရဲ့ .. မောငျ့ရဲ့ဝနျဆောငျခတှေ ယူမသှားတော့ဘူးလား .. ကဲ ´´ မ ကပွောပွောဆိုဆို သူ့ပေါငျပျေါ သို့ကိုယျ တဈစောငျးထိုငျခလြိုကျသညျ၊ အောကျခံပငျတီလေးဝတျမထားသညျကိုပါ သူထပျမံ၍ရှငျးရှငျးလငျးလငျးသိ လိုကျရ၏၊ ဂါဝနျပါးပါးတဈထပျမှတဈပါး မညျသညျ့ကာဆီးမှုမြှမရှိသော နုထှေးအိစကျလှသညျ့ မ၏တငျသားလုံးလုံး တို့က သူ့ပေါငျပျေါ၌ အပွညျ့အဝနရောယူလတေော့သညျ။ နဂိုထဲက မာခငျြရကျလကျတို့ဖွဈနသေော သူ့ဂှဆုံရှိ ခိုးလုခုလုအရာက အိစကျသာယာလှသညျ့ဖိနှိပျမှုကွောငျ့ စိတျထိနျး ထားသညျ့တိုငျ မရမက နိုးထရုံးကွှကာ။
မ၏တငျသားနှဈခွမျးအကွားရှိလှတျမွောကျနယျမွသေို့ ကကြနြနကွီးပငျ မိတျ ဆကျမိလတေော့သညျ၊ မမကျြလုံးလေးအတနျငယျဝိုငျးသှား၏၊ပွီးမှတဈခကျြပွုံးကာသူ့နှာခေါငျးကို ခဈြစနိုးဆှဲလိမျသညျ။ `လူဆိုးလေး မငျးခေါကျထီးပါရဲ့သားနဲ့ဖှကျထားတယျ´ ဟူသညျ့မအပွောကွောငျ့သူတို့နှဈဦးခပျအုပျအုပျရယျ ဖွဈ ကွသညျ၊ပွီးမှသူ့မကျြမှနျအား သာသာလေးခြှတျပေးကာ နှဖူးကိုဖှဖှလေးနမျး၏၊ “ဒါက မိုးစိုခံပီးကားလာမောငျးပေးတဲ့ အတှကျနျော´´ နားရှကျနားကပျခါပွောသညျ၊ နုတျခမျးသားနုနုတို့က နားရှကျကိုကလူကြီစယျသှားကွသဖွငျ့ သူကွကျ သီးမြားထသှားသညျ။ မ၏ ခန်ဒာဖွိုးဖွိုးလေးအား တဈအားဖတျထားမိတော့၏၊စပယျ နံ့လေးကသငျးပြံ့၍နသေညျ။ အတနျကွာမှ မ က လူခငျြးပွနျခှာ၍ `ခမျြးခမျြးစီးစီးနဲ့ကားမောငျးပေးရတဲ့အတှကျ ဒါလေးကိုယူနျော´ ဟုဆိုကာ နုတျ ခမျးလေးစူ၍ မကျြလုံးမှိတျပေး၏၊ ပထမဦးစှာ ပနျးနုရောငျနုတျခမျးဖူးဖူးလေးအား ငုံ၍စုပျလိုကျသညျ။
ပွီးမှပွူတဈတဈဖွဈ လာသောလြှာလေးကို ရဈပတျလိမျစုပျ၍ အနမျးရှညျကွီးတဈရပျဆငျနှဲပါလတေော့သညျ။ အနမျး၏ လှုံ့ဆျောမှုမြားကွောငျ့ ရငျခုနျလှိကျမောကာ စိတျဆန်ဒမြားပွငျးပွလာသညျ၊ လြှာတဈခုလုံးပါလာအောငျဆှဲစုပျ လိုကျခြိနျမြားတှငျ မ၏ရငျသားမို့မို့မြားကော့ကွှလာ၏၊ ထိုအခါ သူ့လကျတဈဖကျဖွငျ့ ထိနျးဖိကာ ခပျရှရှ ဆုပျကိုငျ နယျခြေ ပေးလိုကျမှ မ ကမကျြလုံးလေးမှေးစငျးကာ သကျပွငျးလေးမြားခါခါခလြသေညျ။ ကနျြလကျတဈဖကျဖွငျ့ကြောပွငျလေးအားပှတျသပျပေးနရောမှ ခါးကဉျြးကဉျြးလေးမှသညျ ပေါငျပျေါတှငျ လှုပျရှနသေညျ့ တငျသားစိုငျကွီးတဈခွမျးအား ခပျကွမျးကွမျးလေးဖိနယျပေးလိုကျခြိနျမှာတော့ မ မကျြလုံးလေးပှငျ့လာသညျ၊ ပီးမှ သူနုတျ ခမျးအား ပွှတျခနဲမွညျအောငျစုတျ၍ ပါးစပျခငျြးခှာလိုကျပွီးသူ့ဆံပငျတိုတိုမြားကိုလကျခြောငျးမြားဖွငျ့ထိုးဖှသညျ။ ကဲကားမောငျးခကတျောလောကျပီနျော .. အပွနျခကြွှေခကိုတော့မပေးနိုငျတော့ဘူး။
ပွနျခငျြပွနျမပွနျခငျြနေ မောငျ့သဘော… ဟုတိုးတိုးလေးပွောသညျ၊ သူ့အပြျောမြားငယျထိပျသို့တကျဆောငျ့၏၊ မ၏ရငျသားနှဈခွမျးကွားတှငျ ခေါငျးဖှကျ၍ တငျးကွပျစှာဖကျထားလိုကျတော့သညျ။ ရငျသားနှဈခွမျးအကွားတှငျ မကျြနှာဝှကျထားရသညျမှာ အသကျရှူရခကျခဲသျောလညျး ထိုကဲ့သို့သော အိစကျညကျ ညောမှုမြိုးဖွငျ့ အသကျရှူကွပျသမေညျဆိုက သေ၍ရလောကျသညျ။ တပျမကျမှုဇောကပျနသေညျ့ လကျတို့ဖွငျ့ မ၏ရငျ ဘကျကွယျသီးနှဈလုံးအား ဖွုတျရနျပွငျလိုကျစဉျ `မ´ က “ဟိုးထား .. ဆရာကွီး .. အဝတျတှကေစိုဖနျ့ဖနျ့နဲ့ ရအေရငျခြိုးလိုကျပါအုံး ဖြားသှားလို့ မ ကိုခဈြဖို့အားတှနေညျးသှား အုံးမယျ´´ သူ့လကျတုနျတုနျတို့ တှနျ့ ပွီး တနျ့အသှား မ ကအပှအေ့ဖကျမှရုနျးထှကျပွီး ရခြေိုးခနျးရှိရာ သူမ၏အခနျးသို့ချေါသှား၏။ သူမနောကျမှလိုကျသှားစဉျတှနျ့တှနျ့လေးဖွငျ့တုံနသေညျ့ တငျပါးကွားညှပျဂါဝနျစလေးမှအရညျစိမျ့ကှကျလေးကို မွငျဖွဈ အောငျမွငျလိုကျသေးသညျ။
သူမ လာစပွုနပွေီ ….သူလဲလာစပွုနေ၏၊ သို့ပမေယျ့သူလာသညျက သူမလိုမဟုတျပဲအောကျ ခံဘောငျးဘီ၏ခြုပျတညျးမှုကိုခံထားရသောကွောငျ့ တုတျတုတျကွီးဖွငျ့တိုနရေသညျ။သူရကေိုစိမျပွနေပွခြေိုးလိုကျသညျ၊ အထူးသဖွငျ့ ဆရာသမားကို ဆပျပွာဖွငျ့နာနာတိုကျနမေိ၏၊ သုံးနှဈသုံးမိုး မခြှတျ သညျ့ခြေး သူမ ကိုပွခါနီးမှ လှခငျြနမေိသညျ၊ ခြိုငျးမှေးမြားလဲနုတျခငျြနမေိ၏၊ အခြိနျလငျ့သှားမညျစိုး၍ ဒီအတိုငျးထား လိုကျသညျ။ “မောငျရေ အအေးပတျမယျနျော´´ ဟူသညျ့ သူမ၏အသံကွားမှ လကျစသကျခါ တဘတျခါးပတျ၍ ထှကျလာရတော့ သညျ ၊ရခြေိုးခနျးအပွငျရောကျသျော မွငျကှငျးက ဝငျသှားတုနျးကနှငျ့မတူ ရုတျခညျြးပွောငျးလဲသှား၏ အခနျးမီးကိုမှိတျ ခါခရမျးရောငျ နံရံမီး လေးမြားဖှငျ့ထားသညျ၊ သူမက ကုတျပျေါတှငျ ခွဆေငျးမှီထိုငျ၍ ဖုနျးကိုကလိနေ၏။`မောငျ ဘာဝတျရမလဲ´`ဘာမှမဝတျနဲ့ ..´ရစေိုဆံပငျမြားကိုတဘတျဖွငျ့သုတျရငျးမေးလိုကျသောသူ့အမေး ကို မကပွုံးစိစိဖွငျ့ဖွသေညျ။
သူ့ခါးတှငျတဘတျတဈ ထညျတော့ပတျထားသေး၏ အာ .. အဲ့ရစေိုတဘတျကွီး ကုတငျနားယူမလာနဲ့နျော မ ၏ ညုတုတုအပွောကွောငျ့သူ စပျဖွဲဖွဲဖွဈသှားသညျ၊ခါးမှတဘတျကိုဖွေ၍ အဝတျတနျးပျေါလှားလိုကျသညျ၊ မကနုတျ ခမျးလေးဝိုငျးပွ၏၊ “ကဲ ခေါကျထီးလေး ဘယျမှာဖှကျထားခငျြသေးလဲ´´ မ ကဒီအခြိနျအထိနောကျနိုငျသေးသညျ၊ သူဟနျမဆောငျနိုငျ တော့ .. ၊မ ပျေါသို့ တကျခှကာနမျးတော့သညျ ၊နုတျခမျး ဖြော့ဖြော့မြား ပနျးဆီရောငျသနျးအောငျ ဆှဲစုပျပွဈ၏၊ မ ကသူ့လညျဂုတျကိုသိုငျးဖကျခိုကာ အနမျးမြားကိုတုနျ့ပွနျသညျ။ နှဈဦးလုံး ခဈြစိတျတကျခါအသကျရှုသံမြားပွငျးလာသညျ။ သူတဆငျ့တိုးကာ မ၏ရှရေငျဖွိုးဖွိုး ကိုဂါဝနျအကြီပျေါမှညဈ၍ နယျသညျ၊ ခြှနျထှကျလာသညျ့အသီးခေါငျးလေးနှဈခုအား နုတျခမျးဖွငျ့ညှပျဆှဲ၏၊ သူမ၏ဆီးစပျတှငျဖိ၍ထောကျထားသညျ့ ဆရာသမားကလညျးလှတျလှတျကြှတျကြှတျကွီးနိုးထလာပွီး။
တှငျးအောငျးသတ်တဝါဖွဈသညျ့အားလြှျောစှာ သငျ့လြှျောရာ နရောအား တိုးထှနျ့လူးလှနျ့၍ ရှာနတေော့သညျ။ သငျ့လြှျောရာဖွဈသညျ့ မ၏ အင်ျဂါစပျမှာလညျး အမွှောငျးလိုကျဖောငျးထလာကာ တှငျးစာအား ကွှရှ၍ မွူနသေဖွငျ့နှဈဦး အကွား ခွားနားထားသညျ့ဂါဝနျပါးမှာ ဗီလိနျသဖှယျဖွဈနတေော့သညျ။`မောငျ .. အဲဒီဂါဝနျကို ခြှတျဖို့စိတျကူးမရှိဘူးလား´ မနုတျခမျးလေးကိုကျခါဆိုသညျ၊ဟုတျပသေညျ၊သညျဂါဝနျက ကိန်နရီခြောငျးခွားသကဲ့သို့ သူတို့နှဈဦးအကွား ကနျ့လနျ့ တိုကျနေ၏၊ ပေါငျလညျအထိလိပျတကျနသေောဂါဝနျအား သူအလောတကွီးလှနျတငျမိသညျ၊ခါးနရောတှငျတနျ့သှား၏ သိပျကိုလှပသညျ့ မွငျကှငျးတဈခုကိုခံစားလိုကျရသောကွောငျ့ဖွဈသညျ။ မ၏ ဆီးခုံလေးသညျ ဖှေးအုနပွေီး အမှေးအမွှငျမြားအား ပုံမှနျရိပျသညျ့အတှကျ စိမျးဖနျ့ဖနျ့လေးဖွဈနကော ဌငျး၏ အောကျခွရှေိ အကှဲကွောငျးလေးက မို့မောကျ၍ ခုံးထနေ၏၊ သူဆီးခုံလေးအားတဈခကျြနမျးလိုကျသညျ။
မ တှနျ့ခနဲဖွဈ သှား၏၊ ကွကျသီးဖုလေးမြားထသှားသညျကိုသတိထားမိလိုကျသညျ မ ၏မကျြနှာကိုမော့ကွညျ့လိုကျတော့ သူဘာဆကျလုပျမညျကို ရငျခုနျလှိုကျမောစှာ လိုလားတောငျ့တစှာ စောငျ့ကွညျ့နေ ဟနျတူသညျ၊ မ သညျအတှအေ့ကွုံရှိပွီးဖွဈမှနျး သူသိပါ၏၊ ဌငျးကိစ်စမြားနှငျ့ပတျသတျ၍ သူတို့နှဈဦးစလုံး၏ ရှိခဲ့ဖူး သညျ့ဖွဈခဲ့ဖူးသညျ့ အဖွဈသနဈမြားအားလညျး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ရငျဖှငျ့ခဲ့ကွပွီးဖွဈပါသညျ၊ သို့ဖွဈပါ၍ သူပွောခဲ့သညျ့ အတိုငျး ခွမေလေးကုပျသညျအထိ သူတာဝနျကရြေပအေုံးမညျ။ ပထမဦးစှာ မ၏ပေါငျတံဖှေးဖှေးနှဈဖကျအား သူ့ပခုံးတှငျတငျလိုကျသညျ၊မ ကခါးလညျတှငျခြှတျရနျကနျြနသေညျ့ ဂါဝနျ အား ကိုယျတိုငျဆှဲခြှတျ၍ ခုတငျခရြေငျးသို့ပဈလိုကျ၏၊ သူမ၏ ရငျသားဖှေးဖှေးနှဈခိုငျအားလကျတဈဖကျတဈခကျြစီဖွငျ့ ပငျ့တငျကိုငျဆုတျထားရငျး ခဈြသူ၏အပွုအစုကို ငံ့လငျ့၍နသေညျ၊ ဌငျးကိစ်စကိုသူမ စှဲမကျလှသညျဟုပွောဖူး၏။
စိကပျ၍အရညျအနညျးငယျစို့နသေညျ့ သူမ၏အကှဲကွောငျးဖောငျးဖောငျးကွီးနှဈခုအား လကျဖွငျ့အနညျးငယျဖွဲလိုကျ သညျ၊ အတှငျးသားရဲရဲလေးမြားတှငျ အငျအားပွငျးစှာလောငျမွိုကျပေါကျကှဲထှကျနိုငျသညျ့ စနကျတံနီနီလေးက ငွိမျသကျ ၍ကပျနေ၏၊ ထိုနရောအားသူတဈခကျြနမျးလိုကျသညျ၊မ တှနျ့ခနဲဖွဈသှား၏၊နောကျသူလြှာဖွငျ့ပငျ့တငျလကျြလိုကျသညျ။ မ ပါးစပျလေးဟသှား၏၊ မကျြလုံးမြားမှိတျထား၏၊လြာဖွငျ့ထပျမံ၍ အထကျအောကျ ခပျသှကျသှကျလေးလကျြသညျ။ “ဟငျ့ .. အာ .. အငျးး .. အို့´´ အစရှိသညျ့ညငျးသံသဲသဲလေးမြားထှကျလာတော့သညျ၊ ထို့နောကျ တဈဆငျ့တကျ၍ အတှငျးနုတျခမျးသားရဲရဲနှဈဖကျအားတဈလှညျ့စီ စုတျလကျြ အဝအာအာလေးအားအပွားလိုကျလကျြ နုတျခမျးမြားဖွငျ့ စုဆှဲစုတျ အတှငျးနုခမျးသားကပျကပျလေးနှဈဖကျအား အားကုနျစုတျ၍ခေါငျးရမျးလိုကျခြိနျမှာတော့ မ၏ဖငျသားကွီးမြား ကော့တကျလာကာ သူ့ဆံပငျတှကေိုလကျခြောငျးမြားဖွငျ့ထိုးမှခတြေော့သညျ။
ရှီး .. အာ့ .. ကောငျးလိုကျတာမောငျရယျ .. အာ့ဟာ .. အငျး ကွိုကျတယျ .. မောငျ့ .. အိုး… မက သူ့မကျြနှာကို အတငျးဆှဲကပျ၍ ကာမဒီရမြေားတဈလိပျလိပျတကျခါ စိတျလှတျကိုယျလှတျညငျးနတေော့သညျ။ သူ အရညျကွညျမြားကလညျး စအိုဝစူစူလေးအထိစီးကလြာတော့သညျ။ အရညျမြာအိုငျလာသောအဝအာအာလေးထဲသို့ လြှာကိုလိပျသှငျး၍ မှလေိုကျခြိနျမြားတှငျ သူမတဈဇနျ့ဇနျ့ဖွဈခါ လုံးဝနျးသညျ့နို့အုံမြားကိုညဈခလြေတေော့သညျ။ သူက လြှာကိုအထကျသို့ပငျ့တငျ၍ စနကျတံနီတာရဲအားပငျ့ပငျ့ဆှရာ မခေါငျးမြားဘယျညာရမျး၍ တဈအားအားဖွငျ့အျောလေ တော့သညျ ။နောကျဆုံး တငျးလာသညျ့ထိုအကွောထုံးလေးအား အပျေါအောကျနုတျခမျးဖွငျ့ဆှဲညှပျ၍ နို့စို့သကဲ့သို့ တဈ ပွှတျပွှတျ မွညျအောငျစို့ပေးလိုကျရာ မတဈယောကျ အသံပငျမထှကျနိုငျတော့ဘဲ အံကွိတျ၍ တုံတုံတကျကာ သူ့ခေါငျး အား ပေါငျတံအိအိကွီးမြာဖွငျ့အတငျးညှပျ ကော့ကလနျထိုး၍ ပွီးသှားလတေော့သညျ။
ခနငွိမျသှားပွီး သူ့အားအတငျးဆှဲတငျကာ အရညျမြားပလေကျြရှိသညျ့သူ့နုတျခမျးကိုပွောငျစငျအောငျ နမျးစုပျရကျ၍ အ တငျးဖကျထားသညျ။ “သိပျခဈြတာပဲလားမောငျရယျ .. မလညျးခဈြမယျနျော .. မပါးစပျထဲမှာပွီးခငျြတယျမှတျလား .. မောငျ့ခေါကျထီးလေး ကိုစုတျပေးမယျနျော´´ မကပွောပွောဆိုဆို ဘေးတှငျတဈစောငျးဝမျးလြားမှောကျ၍ ဆရာဂေါငျအားစနမျးပါတော့သညျ။ ထိပျတှငျအရညျအ နညျးငယျစို့နသေော ဆရာအား အရညျခှံမလှနျဘဲ တဈခြောငျးလုံးငုံလိုကျ၏၊ အာငှကွေ့ောငျ့နှေးခနဲဖွဈသှားသညျ။ပွီး မှအရညျခှံအားလြှာဖွငျ့ထိုးထုတျခါ ပျေါလာသညျ့ ကှမျးသီးခေါငျးနီတာရဲအားတပွှတျပွှတျဖွငျ့စုတျပါတော့သညျ၊ ကနဦး ပွော့ခငျြခငျြဖွဈသောငနဲမှာ စုတျအားကွောငျ့ လထေိုးလိုကျသညျ့နှယျဖောငျးတငျးကားထှကျလာကာ အီဆိမျ့တကျ လာ သညျ။ မ၏ပါးစပျအတှငျးပွညျ့သိပျလာသော ငနဲအား လကျတဈဘကျဖွငျ့ထိနျးကိုငျ၍ သှားဖှေးဖှေးဖွငျ့ခွဈသညျ။
သူ အာ့..အာ့ဖွငျ့ ကငျြတကျသှား၏ ၊ဒါကိုမက မော့ကွညျ့ပွီးသဘောကစြှာခဈခဈဖွငျ့ရီသညျ ။နောကျ အငိုကျဖမျး၍ တဈခြောငျးလုံးကိုမွိုခြ သညျ အာခေါငျထဲရောကျသှားသညျ့ထိပျဝတဈခုလုံးအီဆိမျ့တကျသှားသညျ၊ မ၏ဆံပငျမြားအား ဆှဲကိုငျ၍ ကော့ထိုးမိ သညျ ။ပွီးတော့ အှပျအှပျဖွငျ့ ပွနျထုပျ၏၊ အာခေါငျ၏ကနျအားကထိပျဝကိုညှဈညှဈထုပျသညျ့အတှကျ ပွီးခငျြခငျြဖွဈသှား ၍ အောငျ့ထားလိုကျရသညျ။ ထို့နောကျတဈခြောငျးလုံးပါးစပျကထုတျ၍ လကျဖွငျ့ဆုပျကိုပွီး အတနျငယျတှဲနသေော ငုံးဥနှဈလုံးအား မှိနျယှကျစှာငုံ ၍ သုံးဆောငျပါတော့သညျ။ ငုံယုံမက လြှာဖွငျ့ပါ ငုံလြှကျ ထိုးမှကေလိပွီး ပါးစပျထဲတှငျမှနှေောကျကစားကာ လကျကခပျ ပွငျးပွငျး ဂှငျးတိုကျသညျ့အတှကျ ထိမျးမနိုငျသိမျးမရတှဖွေဈကုနျသညျ ။ကော့ကလနျတကျလာသောသူ့အား လကျဖဝါးနုနုဖွငျ့ပှတျသပျ၍ ထိပျဖွားကိုငုံကာ မေးသိုငျးကွိုးနရောအားလြှာဖွငျ့ ခပျ သှကျသှကျလေး ကစားသညျ့အခါတှငျတော့။
တဈခြောငျးလုံး ဆိမျ့အီကငျြတကျလာကာ သုတျရညျမြားတဗွဈဗွဈဖွငျ့ပနျး ထှကျကုနျတော့သညျ၊ ဒါကို မက တဈစကျမကနျြလလှေငျ့မခံဘဲအာခေါငျထဲအကုနျလြာဖွငျ့လိပျ၍မွိုခကြာ ငုံစုပျထား လိုကျသဖွငျ့ မ ပါးစပျထဲတှငျ တဈဇနျ့ဇနျ့ဖွငျ့အရှိနျမသနေိုငျမကျြဖွူဆိုကျနရေသညျ ။ပွီးမှ ပွှတျခနဲနအေောငျစှဲစုတျ၍ သူ့ ကိုသိုငျးဖကျကာညိမျနသေညျ။ တဈလှညျ့စီ ဆန်ဒပွီးမွောကျသှားသညျ့တိုငျ ပငျမကိစ်စမရောကျသေးသညျ့အတှကျ အဝတျမပါ ခန်ဒာမြားကိုထပျလကျြ ပှတျ သပျမှိနျးကာ အားယူနတေော့သညျ။ မ သညျဌငျးကိစ်စနှငျ့ပတျသကျ၍ဝါသနာကွီးသူဟု မဆိုသာသျောလညျး ခုံမငျသညျ့အထဲတှငျပါသညျဟုပွော၍ ရသညျ။ သူ့အားပွုစုသှားသညျ့ စကေး က မနိမျ့လှပေ၊ ယောကျြားကွီးတနျမဲ့ အိပျယာခငျးမြားအား ဆှဲလိမျ မိသညျအထိ ဖွဈခဲ့ ရသညျ။ သူတို့နှဈဦးနီးစပျမှုရခဲ့ခွငျးသညျလညျး ဌငျးကိစ်စ နှငျ့မကငျးခဲ့ခြေ၊ ရငျးနှီးမှုရလာသညျနှငျ့ သားဖှားမီးယပျ ပိုငျး ဆိုငျရာ ဆေးပညာမြား။
နောကျဆုံးပျေါဆေးပစညျးမြား ကို လူခငျြးတှေ့၍တဈမြိုး ၊ဖုနျးဖွငျ့တဈသှယျ ဆှေးနှေးမေး မွနျး အသိခငျြးဖလှယျကွရာမှ ရငျးနှီးမှု၊ ပှငျ့လငျးမှု၊သာယာမှုမြားရလာကာ ယခုအခွအေနအေထိတကျလှမျးနိုငျခဲ့ခငျြးဖွဈ ပသေညျ။ မ က အတနျငယျပြော့နသေညျ့ ကောငျလေးအား လကျဖွငျ့ညှဈဆော့နရောမှ အရညျပွားကို ကကြနြနလှနျခလြိုကျခါ ပျေါလာသညျ့ ခေါငျးတုံးပွောငျပွောငျကို နုတျခမျးဖွငျ့ငုံညှပျ၍ ပွှတျခနဲမွညျသညျအထိ အားရပါးရဆှဲစုပျလိုကျသညျ။ ပထမတဈခြီတှငျလုံ့လစိုကျထုတျစရာမလိုပဲ နုညံ့သညျ့လြှာ၏အစှမျးဖွငျ့ ပီးထား၍လားမသိ အားကုနျခွငျးမရှိဘဲငေ့ါငေ့ါ၍ ထောငျ ထလာသညျ၊ အရညျပွားကိုအကုနျလှနျတငျထားသဖွငျ့ ထိပျသညျဂြာမနျသံခမောကျကဲ့သို့ ကားထှကျနေ၏။ ဌငျး ကို မ ကမကျမောစှာတဈခကျြနမျးလိုကျပီး မေးသိုငျးကွိုး၊ ဆီးပေါကျ၊ ထိပျသားနုနုနှငျ့ ဇောငျးသားမွောငျးသားမြားပါမ ကနျြ လြှာခြှနျလေးဖွငျ့ တို့ထိ လြှကျဆှဲလရော။
အကွောမြားအပွိုငျးပွိုငျးထလာသညျအထိ ထောငျမတျလာတော့သညျ…. ကုနျးလကျြနသေညျ့ မ မကျြနှာလေးအား ဆှဲယူလိုကျပွီး နုတျခမျးလေးမြားအား အကငျြနာပေးလိုကျသေး၏၊ ပွီးမှ ကု တငျတှငျလှဲသိပျလိုကျပီး ပေါငျတံနှဈခြောငျးအား ဖငျသားဖှေးဖှေးကွီးမော့လာသညျအထိ ဆှဲထောငျဖွဲကားလိုကျကာ မပှငျ့တပှငျ့အာနသေညျ့ အသားညှပျမုနျ့ ဖှေးဖောငျးဖောငျးကွီးကိုတထေ့ောကျထားလိုကျတော့သညျ။ မ ကမကျြနှာလေးမော့၍ သူ့လညျဂုတျကို လကျနှဈဖကျယှကျတငျ၍ ဆှဲခို၏ ၊မွနျမွနျထညျ့လိုကျတော့ဟူသညျ့သဘော၊ သူက ဗလာကငျြးနသေညျ့ မ နို့အုံ ဝိုငျးဝိုငျးနှဈခုအား လကျဖွငျ့ စုံညှဈကိုငျအားယူကာ ဖိခလြိုကျသညျ၊ပထမတဈခြီ ပီး ထားသညျ့ အရညျလကျကနျြမြားမခွောကျသေးသော မ၏ အတှငျးသားစိုစိုမြားကွားသို့ ခေါငျးတဈခုလုံး ပတဈခနဲဝငျ သှားသညျ ။ထောငျဖွဲထားသညျ့ မ၏ ပေါငျတံမြားအား ပခုံးပျေါဆှဲတငျလိုကျပွီး ဆကျလကျ၍ ကနျြရှိနသေညျမြားအား ခပျနှဲ့နှဲ့လေး ဖိ ဖိသှငျးလိုကျရာ။
စှတျစိုအိထှေးနသေညျ့ အတှငျးပိုငျးထိ တဈရဈရဈဖွငျ့တိုးဝငျသှားပွီးဆီးခုံခွငျးမိတျဆကျမိသညျ။ မ ခေါငျး လေးပိုမော့သှား၏၊ မကျြခုံးမြားရှုံ့ထားသျောလညျး ပါးစပျကလေးဟလိုကျခွငျးက ဝငျဝငျခွငျးနာကောငျးကလေး ကောငျး သှားသညျဟူသညျ့ အဓိပါယျပငျဖွဈသညျ။ အတှငျးသားရှရှမြား၏ ရှုံ့ပှဆှဲညှဈမှုကွောငျ့ အရသာလိုကျလာကာ ခေါငျးပျေါသညျအထိ တဈဆုံးဝငျတဈဆုံးထှကျ ပုံမှနျ ကလေး ညှောငျ့နမေိသညျ၊ ပေါငျကိုပခုံးတှငျထမျးထားသဖွငျ့ မ၏မုနျ့ပေါငျးဖှေးဖှေးကွီးက အလိုကျသငျ့ဦးမော့ကာအဝငျ အထှကျကို အဆငျပွေ စေ၏ ၊ နို့ကိုညှဈနယျနရောမှ ခုတငျမှကွှရှကော့တကျလာသညျ့ တငျပါးဆုံဖှေးဖှေးကွီးအား ထိမျးကိုငျ၍ အရှိနျအနညျး ငယျမွှငျ့ကွညျ့သညျ၊ အရညျလိုကျလာသညျ့အတှကျ အဝငျအထှကျကောငျးလာ သညျ၊ ကနဦးစနောကျနေ နိုငျသေးသညျ့ မ က အခုစကားပငျမပွောနိုငျပဲ သူ့အဝငျအထှကျမြားအား ပငျ့ပငျ့ကော့ခံလာ သညျ့ အတှကျ သူထပျမံ၍ အရှိနျနှငျ့ ပွငျးအားကိုတငျကာ ဖိဖိ၍ ဆောငျ့တော့သညျ။
အငျ့ .. အငျ့ .. အာ့ .. ဟုတျပီ .. မောငျ .. ဆောငျ့ .. အငျ့ .. ဆောငျ့ကှာ .. အီးး …. ဆီးခုံခငျြးရိုကျမိသညျ့ ဖတျ ဖတျ ဖတျ ဟူသညျ့အသံ၊ တှဲသညျ့ဥနှဈလုံးနှငျ့ ဖငျဝတို့ရိုကျမိသညျ့ ဖလုတျ ဖလုတျ ဖလုတျ ဟူသညျ့အသံ၊ ထမျးထားသောပေါငျနှငျ့ရငျဘကျတို့ရိုကျမိသညျ့ ဘတျ ဘတျ ဘတျ ဟူသညျ့အသံ၊ အားဖွငျ့ဆောငျ့ခြ လိုကျတိုငျး ကော့ခံနသေညျ့မ၏ခါးနှငျ့ထိခတျမိသညျ့စပရငျမှယေ့ာ၏ တကြိကြိအသံမြားနှငျ့အတူ ကာ မဒီရေ ဝုနျးခနဲ ဆောငျ့အတကျ မှိနျယှကျစှာအျောညညျးသညျ့ မ၏ အသံတို့က စီးခကျြညီစှာထှကျလာ၏။ သူတို့နှဈဦး၏ပထမဦးဆုံးအကွိမျမို့ အိဒွဆေယျကာအောငျ့အီးထားသမြှ ဆောငျ့ခကျြကောငျးလှနျးသဖွငျ့ ဟနျမဆောငျ နိုငျတော့ပဲ ဖိဖိဆောငျ့လိုကျတိုငျးဝိုငျးဝိုငျး၍ယမျးခါသှားသညျ့ရငျသားဖှေးဖှေးကိုစုံညဈကာအားရအောငျအျောတော့သညျ၊ အျောလေ ဆောငျ့ရသူမှာ အားတကျလဖွေဈသညျ့အတှကျ ဖငျသားအယျအယျကွီးမြားကို စုံဆှဲဖွဲ၍ ကော့ကော့ထညျ့နေ မိသညျ။
မ….မှာကောငျးလှနျး၍ တုံတုံတကျလာသဖွငျ့ ရုတျတရကျအဆောငျ့ရပျ၍ အကှဲကွောငျးထဲမှ ငေ့ါငေ့ါလေးထောငျထ နသေညျ့ စနဈတံလေးကို ငုံ၍ဖိစုပျထားပေးလိုကျရာ မမှာမှေးယာကိုလကျဖွငျ့တဈဗုနျးဗုနျးရိုကျ၍ မကျြဖွူဆိုကျကာ ကော့ထိုးလနျထှကျပီးသှားတော့၏။ အရညျမြားပှကျအံကလြာကာပှစိပှစိဖွဈနသေညျ့ မ၏ အောကျနုတျခမျးမှခှာ၍ မောဟိုကျတုံရငျကာ ဟစိဟစိဖွဈနေ သညျ့အပျေါနုတျခမျးသို့ စုပျနမျးလိုကျသညျ။`မောငျ .. အရမျးဆိုးတယျကှာ.. မ မကျြဖွူတောငျဆိုကျတယျ ´`ခဈြတာကိုး .. မရဲ့ .. ခွမေကုပျယုံတငျမကဘူး ..မကျြဖွူတောငျဆိုကျတယျမှတျလား .. ဟိဟိ´နှာဘူးကွီး .. ကဲလာ ..မအလှညျ့ .. မငျးလဲမကျြဖွူဆိုကျသှားစမေ့ယျ မက သူ့ကိုဆှဲလှဲ၍ထောငျနသေညျ့ ညီလေးကိုကိုငျကာ တေ့၍ထိုငျခလြိုကျသညျ။ အရညျမြားရှဲနေ၍ဗလှတျခနဲဝငျသှား၏ “အငျ့ .. ဖွေးဖွေးလုပျပါ မရဲ့´`ဟငျ့ အငျး မရတော့ဘူး နှာဘူးတဈအားထနဘေီ မလဲ´ သူတို့ခပျအုပျအုပျရယျဖွဈသညျ။
အသငျ့အနအေထားပွငျပွီးသညျနှငျ့စဆောငျ့တော့၏၊ မ မွငျးစီးပုံကအဆနျးဖွဈသညျ သူ တဈခါမြှမတှဖေူ့းပေ၊ ထောငျထားသညျ့သူ့ပေါငျမြားကို သူမကမှီထိုငျထားပီး အင်ျဂါစပျနှဈခုအားတပျရကျထိုငျထားကာ ပေါငျကိုစိလြှကျ ခွဖေဝါးနှဈခုအား သူ့ရငျအုံပျေါသို့နငျး၍ပှတျခွငျးဖွဈသညျ ။ကြောမှီအားဖွငျ့ ဖငျကိုစကောဝိုငျးမှဆေ့ောငျ့ သကဲ့သို့ သူ၏ယောကျြားနို့စူတူတူကိုလညျး ခွဖေဝါးဖွငျ့ပှတျဆှသောကွောငျ့ အရသာကောငျးလှသညျ။ ပူး၍စထေ့ားသညျ့ အင်ျဂါဇတျ စီးထှေးထှေး၏ ပငျြးထနျစှာ မှဆေ့ောငျ့အားကွောငျ့ အတျောပငျ ဆိမျ့အီတကျလာကာ အောငျ့မထားနိုငျတော့ပဲ မေးကွောမြားတငျးလာသညျအထိ အရသာတှလေ့ာသညျ၊ သူ့အခွအေနကေိုကွညျ့၍ မက အနအေထားခကျြခငျြးပွငျလိုကျသညျ ။ခွနှေဈခြောငျးကိုရငျဘကျမှပွနျခြ၍ ဖငျကိုပဈခါးကိုကော့ကာ တဈဗြောငျးဗြောငျးဖွငျ့ ဆောငျ့တော့သညျ၊ သူမအံကို ကြိတျ၍ ခေါငျးကိုမော့ထား၏။
အကွှအဆောငျ့တှငျ ယမျးခါဝဲသှားသညျ့ ဆံပငျမြား အိတုံဝိုငျးတကျသှားသညျ့ရငျသားဖှေး ဖှေးမြား ကား၍တဈဗြောငျးဗြောငျးမွညျအောငျဆောငျ့ဆောငျ့ခလြာသညျ့ တငျသားကားကားတို့ကိုကွညျ့၍ ဆိမျ့အီတကျ လာကာ သူမ၏အတှငျးနံရံမြားအားတဈဗနျြးဗနျြးဖွငျ့ပနျးထုတျလိုကျတော့သညျ ကာမအရသာ၏ ခြိုမိနျအီဆိမျ့ခွငျးကို နှဈဦးသားပှဖေ့ကျပှတျသပျခွငျးဖွငျ့ မှိနျးမောအားယူပွီးနောကျ နှမျးလြှစှာအိပျပြျော သှားတော့သညျ။ အိပျပြျောသှားသညျ့တိုငျ သူ့အားမကျမောစှာပှပေို့ကျ၍ နုတျခမျးထောငျ့စှနျးလေးကှေးရုံပွုံးနသေညျ့ မ၏မကျြနှာသညျ တဈကိုယျရညျ အထီးကနျြမှုမြားမှ ခနတာသကျသာရာရသှားဟနျတူ၏၊ ဘာပဲဖွဈဖွဈသူကနြေပျပါ သညျ၊ မ ကိုသူသိပျခဈြသညျ၊ သူ့ဘကျကပေါပေါလောလော ပေးဆပျနိုငျသညျ့ အကငျြနာမြားဖွငျ့ မဘဝလေးကိုတတျ နိုငျသရှဖွေ့ညျ့ဆညျးပေးရနျဆုံးဖွတျမိသညျ။ထိုနညေ့မှစ၍ အားလပျရကျညတိုငျးလိုလို သူ့ဘေးတှငျ မ၏ကိုယျငှနှေ့ေးနှေးလေးရှိနတေတျလတေော့သညျ……ပွီးပါပွီ။
အဲ့ဒီ မနက်က…အိပ်မက်ကောင်းများနှင့် ထိတွေ့ခြင်းကင်းခဲ့သည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သောမည်ကာမတ္တအိပ်စက် ခြင်းတစ်ခုမှ ပျင်းရိညီးငွေ့စွာနိုးထခဲ့မိသည်…။ ဖြစ်နေကျမနက်ခင်းကလည်း ထုံးစံအတိုင်း အေးတိ အေးစက်နှင့်ပေါ့ … ဘေးနားတွင်ရံဖန်ရံခါရှိခဲ့ဖူးသော အနွေးဓါတ်လေးတစ်ခုအား မရှိနိုင်မှန်းသိရက်နှင့် စမ်းဖြစ်အောင်စမ်း လိုက်မိသေး၏၊ အေးစက်သောအတွေ့ရှိသည့်သူ့မျက်မှန်ကိုသာစမ်းမိလိုက်သည်၊ သူအရှက်ပြေကောက်တပ်လိုက်၏၊ အမှန်တစ်ကယ် သူထိတွေ့ချင်ခဲ့သည်မှာနုထွေးအိစက်လှစွာသောချစ် သူ၏ ခန္ဓာကိုယ်ပင်ဖြစ်ပေတော့သည်။ `လွမ်းစရာရှိလျှင် နာစရာနှင့် ဖြေရသည်´ ဟူသည့်စကားရှိသော်လည်း လွမ်းစရာကြုံလာ တိုင်းနာကျည်းစရာကို သူရှာမတွေ့ခဲ့မိပါ၊ တစ်ကယ်တမ်း နာကျည်းစရာများလုပ်ခဲ့သူက သူကိုယ် တိုင် ဖြစ်နေခဲ့သည်လေ။ သူ့ကို ` မ´ ထားရစ်ခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်ပင် ပြည့်ခဲ့ပါပြီ၊ထားခဲ့သည် ဆိုခြင်းထက် စိတ်ပျက်ရွံမုန်းစွာ စွန့်ခွာသွားသည်ဆိုခြင်း က ပိုမှန်ပေလိမ့်မည် ။
အားလုံး ပြီးသွားခဲ့ပါပြီ မောင်ရယ်´ လို့သူမ ပြောခဲ့သော်လည်း ခုချိန်ထိအောင် သူ့ရင် ထဲက ထွက်ခွာသွားခြင်းမရှိသေးပါ သူမနှင့်တွေ့ဆုံရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့သည့် အချိန်များ၊ အကြည့်ချင်းဆုံ ရင်ခုန်လှိုက်မော လူငယ်တို့ဘာသာဘာဝ ချစ်ကြိုးသွယ်ခဲ့သည့် ကာလများ၊ ရည်းစားသက်ကြာ လာသည်နှင့်အမျှ သူမ၏ ကိုယ်ပိုင်တိုက်ခန်းကလေး၌ ပါးချင်းအပ် ရင်ချင်းကပ်၍ ချစ်ရည် လူး ချစ်နယ်ကျူး ခဲ့ကြသည့် အချိန်များက ကပ်ပါးမှိုပင်များသဖွယ် သူ့ရင်မှာ တွယ်ကပ် ငြိတွယ်နေ ကြဆဲဖြစ်၏။ အသည်းပုံစားပွဲတင်နာရီလေးကို ကြည့်လိုက်တော့ အချိန်က ၇နာရီ၃၀အတိ၊ ရုံးသွားရန် အချိန်နီးကပ်လာပေပြီ၊ အိပ်ပုတ်ကြီးတဲ့မောင့်အတွက်ဟု နာရီမှန်ပေါ်တွင် စီဒီမာကာပန်ဖြင့် ရေး ထားသည့် ချစ်သူ၏လက်ရေးလှလှလေးများက မှိန်ဖျော့ဖျော့အော် … ကြာခဲ့ပြီပဲလေ မောင့်ကို လွမ်းရင်ဖြေစရာ နာကျည်းစရာလေးများ ပေးပါအုံးလား `မ´ရယ် …၊ သူ ကုတင်ပေါ်ခြေဆင်းထိုင်ရင်း တွေဝေမိနေသေး၏။
ပြီးမှ ဖြစ်နေကျ ဂယောက်ဂရက် အတွေးများကိုသက်ပြင်းတစ်ချက်ဖြင့်မှုတ်ထုတ်ဖယ်ရှားကာမနက်တိုင်းလုပ်နေကျတစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှုများအား အစီအစဉ်မကျစွာ သုတ်သီးသုတ်ပြာဖြင့် ဖြေ ရှင်းပြီး ဘတ်(စ်)ကားမှတ်တိုင် သို့ထွက်ခဲ့သည်။ ကားမှတ်တိုင်ရောက်သည့်တိုင် အလုပ်ကိစ္စ ဝေယာဝတ်စများကမပြီးသေး ၊ ဒီနေ့အပြီးအပ် ရမည့် ဆေးစာရင်းများအား နေရာလွတ်တစ်ခုတွင်ထိုင်၍ စစ်နေမိ၏။ ထိုစဉ်အကျွမ်းတ၀င်ရှိခဲ့ ဖူးသည့်ရေမွှေးနံ့တစ်ခုကို ရှုရှိုက်မိသည်။ “မောင်လေး .. နေမျိုး´´ သူ့ရှေ့မှခေါ်သံတစ်ခုကြောင့် မျက်မှောင်ကြုပ်မိသည်၊ ဒီရပ်ကွက်သို့သူပြောင်းလာသည် မှာကြာပြီဟုဆိုနိုင်သော်လည်းသူ့အားနုတ်ဆက်ခေါ်ပြောသူ မရှိခဲ့ဖူးပါ ၊ နာမည်ချင်းတူလို့များလား သူ နဝေတိမ်တောင်ဖြင့် မော့ကြည့်မိ၏ ၊ ပထမဆုံးမြင်လိုက်ရ သည်က… ဘော်ငွေရောင်ဒေါက် မြင့်ဖိနပ်စီးထားသည့် ခြေထောက်လှလှတစ်စုံ၊ ဒုတိယ ပြည့်သောပေါင်တံ ကျဉ်းသောခါး။
ထွားသော ရင်အစုံတို့ကို အနက်ဘက်သန်းသည့် ပါတိတ်ဝမ်းဆက်ဖြင့် တင်းရင်းချပ်ရပ်စွာ ဆင်မြန်း ထားသည့်ခန္ဓာကိုယ်၊ တတိယ သွယ်လျှသောမေးရိုး တိရိသပ်ရပ်၍ ပြုံးယောင်သန်းနေ သည့် ယစ်မူးဖွယ်နုတ်ခမ်းပါးတစ်စုံ စူးရှ၍ အရည်လဲသောမျက်ဝန်းနက်နက် တို့ဖြင့်တန်ဆာဆင် အပ်သော အမျိုးသမီးတစ်ဦးး …..။ သူ့အမြင်အာရုံတို့ မူးနောက်ေ၀၀ါးလာကာ နှလုံးသွေးများငယ်ထိပ်သို့ ဒိန်းခနဲ တက် ဆောင့်သကဲ့သို့ခံစားလိုက် ရသည်၊ သူအကြည့်ကိုချက်ချင်းလွှဲဖယ်မိ၏။သူ့ခံစားချက်ကို ထိုအမျိုး သမီးလည်း ခံစားသိရှိပေလိမ့်မည်၊ သူမနုတ်ခမ်းတွေ မသိမသာတုန်နေသည်ကိုသတိထားမိ၏။ “ခင်ဗျားးး….´´ သူ့စကားသံတို့က ဘီလူးစီးခံရသူကဲ့သို့ တိမ်ဝင်သွားသည် အမျိုးအမည်မသိသည့် ဆိုးရွားလှသော တွေ့ဆုံမှုတစ်ခုပေ၊ သူမကိုတွေ့မြင်လိုက်ရ သည်မှာ သူရဲသူဘက်တစ်ကောင်ရှေ့ မှောက် ရက်လဲနေသူကဲ့သို့ ထိတ်လန့် ရွံ ရှာဖွယ်ကောင်းလှသည်။
တစ်ကယ်တမ်း သည့်ထက်ဆိုး ခဲ့သည်ကိုတော့ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်သိခဲ့မှာပါ နုနုဇင်။ “မောင်လေးကိုတွေ့လိုက်လို့ နုတ်ဆက်တာပါကွယ် နု တောင်းပန်စရာလည်းရှိလို့ပါ´´ သူမ၏ မျက်နှာလှလှအား သူဆက်ခနဲကြည့်မိသည်။ မျက်လုံးမှမီးတောက်များလျှံကျလာမ လားမပြောတတ်၊သူ့အကြည့်ကြောင့် နုနုဇင်မျက်နှာလေးပိုငယ်သွာသည်။ “ဒေါက်တာမမကြီးရယ် ခင်ဗျားခွဲပေးလိုက်လို့ ကျွန်နော်တို့အသည်းတွေ ဟတ်တက်ကွဲ ခဲ့ပြီးမှတောင်ပန်မလို့လား ခင်ဗျားပြလိုက်တဲ့ပညာခန်းတွေကို ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်သိပါတယ် မင်းသမီးရှုံးလောက်ပါရဲ့ ခင်ဗျားကြောင့် `မ´ဘယ်လောက်ခံစားခဲ့ရလည်း .. ထားပါ ကျွန်နော့်အ ပြစ်လဲမကင်းပါဘူး ခင်ဗျားကြောင့်ရယ်လို့ တဖက်သက်မပြောတော့ပါဘူး အားလုံးပြီးသွားပြီ ဇာတ်သိမ်းခန်းရောက်မှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း စာတမ်းထိုးမနေနဲ့တော့ဗျာ ခင်ဗျားတောင်းပန်တာရှုံး တဲ့လူကို ကြေးတံဆိပ်နဲ့လာနှစ်သိမ့်နေသလိုပဲ ပိုပူလောက်တယ်´´ သူ့အသံအနည်းငယ်ကျယ်သွားသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်မှလူများကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်လုပ် လာကြ၏၊ နုနုဇင်ခေါင်းငုံ့ထားသည်။ “ဆောရီးပဲ ခင်ဗျားနားမလည်ခဲ့ပေမယ့် ကျွန်နော်ကတော့မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့အရှက်နဲ့ သိက္ခာကိုနားလည်တယ် ဒီလောက်နဲ့တော်ရအောင်ဗျာ ဒေါက်တာကတော့ဘတ်စ်ကားမစီး လောက်ပါဘူး ခင်ဗျားကားဆီပြန်သွားပါတော့ ကျွန်နော်လည်းသွားတော့မယ်´´ “နုက မှတ်တိုင်နောက်ကဆေးခန်းမှာပါ မောင်လေးကိုမြင်လိုက်လို့ပါ နုပြောစရာတွေ ရှိတယ် မင်းနားထောင်သင့်တယ်´´ သူလက်ကာလိုက်သည်၊နုနုဇင်ပြောလက်စစကားများတန့်သွား၏ “တော်ပါဘီ ဒေါက်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ထပ်ပီးဒုတ်ခမပေးချင်ပါနဲ့တော့ သွားပါရစေ တော့ဗျာ´´ ထိုစဉ် ရပ်လာသည့်ဘယ်နံပါတ်မှန်းမသိသောကြုံရာကားပေါ်သို့ပြေးတက်ခဲ့မိသည် ။နုနုဇင် ၏“ဒီကိစ္ခက မင်း မမ ရဲ့စနက်မကင်းဘူးဆိုရင်ရောကွာ´´ဟူသည့်အသံသဲ့သဲ့တို့ကျန်ခဲ့သည်။
သူကားပေါ်ရောက်သည့်တိုင် ထူပူနေဆဲဖြစ်၏ ၊နုနုဇင်၏စကားများက နားထဲပဲ့တင်ထပ်နေ သည်၊ခေါင်းကိုတွင်တွင်ရမ်းမိသည်။ သည်မိန်းမလီဆယ်ပြီှးပြောတာ၊`မ´တွင်ဘာအပြစ်မှမရှိ တစ် ကယ်အပြစ် ရှိခဲ့သူက သူကိုယ်တိုင်ပါ။ စောင့်ထိန်းနိုင်မှုမ ရှိခဲ့တဲ့ဒီကောင်ပါ။ရုံးရောက်တော့ မျက်နှာပျက်နေသေးသည့်သူ့အား လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များက သတိထား မိကြသည်။ စပ်စုခြင်းတော့မရှိကြ သူမျက်နှာပျက်လာတာ ပထမဆုံးအကြိမ်မှမဟုတ်တော့ဘဲလေ။ သူ့ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်၍ တွေတွေကြီးစဉ်းစားနေမိသည်၊သူမှားခဲ့ပါသည် မှားခဲ့သလောက် လည်းဆုံးရှုံးခဲ့ အရှက်ရခဲ့ပါသည်၊ သည်ဇတ်လမ်းကို မေ့ချင်ယောင်ဆောင်ထားခဲ့သည်မှာလည်း ကြာခဲ့ပါပြီ၊ သို့ပေမယ့် နုနုဇင်၏ စကားတစ်ခွန်းကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သမျှအား ပြန်လည်သုံးသပ်ရပေ ဦးတော့မည် ….။ သူနှင့်သူ့အချစ်ဆုံး`မ´တဖြစ်လဲ ဒေါက်တာလဲ့လဲ့ဖြူ တို့၏ဇာတ်လမ်းမှာ အပျော်ဖတ် အချစ် ၀တ္ထုများကဲ့သို့ဆန်းပြားမှု မရှိခဲ့ပါ။
ဆေးကုမ္ပ္ပ္ပဏီတစ်ခုမှသာမာန်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးနှင့် ပုဂ္ပလိကဆေးရုံတစ်ခုမှအလုပ်သင် ဆရာဝန်မလေးတစ်ဦးတို့၏ ရိုး ရှင်းသည့် အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး တစ်ခုသာဖြစ်ပါသည်၊ အဆင့်အတန်းချင်း မတူညီသည့်တစ် ချက်သာပြောစရာရှိခဲ့၏။ ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ သူတို့နှစ်ယောက်အကြားတွင်ပြသနာဟုမယူဆခဲ့သည်ကို မျက်ဝန်းချင်းငြိ အကြည့်ချင်း ဖ လှယ် ချစ်ကြိုးသွယ်မိကြကတည်းက နှစ်ဦးစလုံး နားလည်သိရှိခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါသည်၊ သူ၏ ရိုးသားကြိုးစားမှုနှင့်အရည် အချင်းကို `မ´က ယုံကြည်သကဲ့သို့ သူကလည်း မ၏ အဆင့်အတန်းနှင့်ဂုတ်သိက္စ္ခာတို့အား လေးစားခဲ့ပါသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်အကြား အချစ်တစ်ခုသာခြားနားထား၏၊ ရင့်ကျက်ပြီးခေတ် ပညာတတ်လူငယ်နှစ်ဦး၏ ချစ်ခြင်းက ဆယ်ကျော်သက်စုံတွဲများကဲ့သို့ ကန့်သတ်ချက် မရှိ ပွင့်လင်းခဲ့ပါသည်၊ မိဘများမှာ နယ်မြို့လေးတစ်မြိုတွင်နေထိုင် သည့်အလျောက်။
ရန်ကုန်တွင် တိုက်ခန်းငှား၍ တစ်ကိုတည်း နေသော `မ´၏အထီးကျန်မှုများ အား သူ့အချစ် ဖြင့် ပြည့်စုံစေခဲ့သည်၊ `မ´ကလည်း သူမထက်အသက်ငယ်သည့် သူ့တောင်းဆိုမှုမှန်သမျှအား ငြင်းဆန် ခြင်းမရှိခဲ့ပါ၊ ထိုမျှ အပေးအယူတည့်ခဲ့သည့် ချစ်သူနှစ်ဦး၏ ပထမဦးဆုံးညအား ငွေရောင်ပိတ်ကားတွင် နောက်ပြန်ရစ် ကြည့်သကဲ့သို့ ပြန် လည်မြင်ယောင်မိပါသေးသည်…။ အဲဒီ ညက … ။ မစွေသော်လည်း သည်းသည့်ရန်ကုန်မိုးက သူတို့နှစ်ဦးကိုနီးစပ်မှုများ ပိုမိုဖြစ်တည်စေခဲ့သည်၊ သူ့တစ်ကိုယ်လုံးရွဲရွဲစိုနေ သည့်တိုင် `မ´ကတော့ခြောက်ခြောက်သွေ့သွေ့ရှိနေခဲ့၏၊ မေးတဂတ်ဂတ်ဖြင့် ကားမောင်းနေသောသူကို ပြုံးပြုံးလေး ကြည့်နေသည်။ မ မောင်ချမ်းနေဘီနော် ပြန်လျော်ပေးရမယ် မိုးရွာရင်ကားမမောင်းရဲဘူးဆိုလို့ ဆေးရုံကိုမိုးစိုခံပီးလာခဲ့ရတဲ့ခြေကြွခ ရယ်၊ ချမ်းချမ်းနဲ့ကားမောင်းပေးရတဲ့ဝန်ဆောင်ခရယ် ၊ ပီးတော့မိုးစိုစိုနဲ့ပြန်ရမယ့် အပြန်စရိတ်ရယ် သုံးခုနော်။
အော်… မောင်ရယ် မောင်မကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲလို့ တစ်ခါလေးစမ်းကြည့်မိပါတယ် လျော်ကြေးတွေ တောင်းနေ လိုက်တာ အဲ့လိုကြေးလား မောင်က မျက်စောင်းချိုချိုလေး တစ်ချက်ထိုးရင်းပြောသည်၊ နုတ်ခမ်းထူထူလေးများကိုလည်းစူထား၏၊ နုတ်ခမ်းနီဆိုးမထား သော်လည်းပန်းရောင်သန်းနေသည့် `မ´နုတ်ခမ်းလေးများက နမ်းစုပ်ချင်စရာကောင်းအောင်လှနေသည်။`မရပါဘူးဗျာ .. မ တို့တောင် စမ်းသပ်ခယူသေးတာပဲ မောင်လဲယူရမှာပေါ့ ချစ်သူချင်းလဲမရပါဘူးနော် စပါးက တော့ပေါက်ဈေးပဲဗျ´`စကားသိပ်တက်တယ် လူလည်ကြီး .. ဟုတ်ပီလေ ဒါဆိုလဲ ၀န်ဆောင်မှုတော့အပြည့်ပေးနော် မ ကကြိုက် မကြိုက် ကြည့်ရအုံးမှာ´`အိုခေ ..၀န်ဆောင်မှုကတော့အာမခံတယ် အပြည့်အ၀ ပေးမှာ ကောင်းလွန်းလို့ ခြေမလေးကို ကုပ်သွားစေရမယ် သိလား မ´´ သူ့အပြောကြောင့် `မ´ပါးမို့မို့လေးများတွင် ရှက်သွေးတို့ နီမြန်းသွား၏။ သူ့ပခုံးပေါ်လက်သီးဆုပ် နုနုလေးများအဆက်မပျက်ကျလာတော့သည်။
အာ့ .. လူညစ်ပတ်ကြီး .. ဘာစကားတွေပြောမှန်းမသိဘူး .. ကဲ ..ကဲ´´ တစ်ကယ်တမ်း နုတ်အားဖြင့် အထေ့အငေါ့ လေးများ ပြောဆိုနေကြသော်လည်း ထိုအချိန်အထိ လွန်လွန်ကျူးကျူးမရှိ ကြသေးပါ၊ မ ဆေးရုံအပြန်တွင် သူကားမောင်း၍ လိုက်ပို့မြဲဖြစ်သော်လည်း ရိုးရိုးသားသားပင်ဖြစ်သည် လိုက်ပို့ပြီးသည် နှင့်သူပြန်လေ့ရှိ၏၊ သည်းသည်းမဲမဲရွာနေသည့်မိုးကိုသာအပြစ်ဖို့ရပေတော့မည်၊ မ ၏တိုက်ခန်းရှေ့ရောက်သည်အထိ မိုးကမစဲနိုင်သေး၊ ကား စက်သတ်ပြီးသည်နှင့် မ ကသူ့ကိုထီးတစ်လက်ကမ်းပေးသည်။`ရတယ် မ မောင်ကစိုပြီးသား `မ´ သာလုံအောင်ဆောင်း´`အွန့် ဘယ်လိုလဲ အပြည့်အ၀ ဆို ဆောင်းပေးလေ ဟွန့် .. မကြိုက်တော့ဘူးနော် ဒီဒရိုင်ဘာတော့´´ မ ကမချိုမချဉ်မျက်နှာပေးဖြင့်ဆိုသည်၊ သူ့ရင်ထဲယားကျိကျိဖြစ်သွား၏။ `ကဲပါဗျာ ဟုတ်ပါဘီ လုပ်ပေးရမှာပေါ့ ကဲပေး´ မ ဆီကထီးကို ယူလိုက်ပီး သူမ ကားထဲကထွက်သည်အထိဆောင်းပေးသည်။
ကားတံခါးပိတ်သည်အထိစောင့်နေလိုက် သေး၏၊ ပြီးမှထီးကိုပိတ်၍ ပြေးလေတော့သည်၊ ကားရပ်သည့်နေရာနှင့်လှေကားကလည်းဝေးလေတော့ သူမ ပြေး ၀င်ရန်အခွင့်မသာပေ၊သူမအငိုက်မိသွား၏၊ ရွာလေသောမိုးစက်တို့က မ ၏ စပန့်သားပွင့်ရိုက်ဝမ်းဆက်ပါးပါးလေး ပေါ်သို့ ဒလဟောစိမ့်ဝင်ကာ ရွှဲရွှဲစိုစေတော့သည်။ အရောင်ကလည်းနို့နှစ်ရောင်ဖြော့ဖြော့ဖြစ်သည့်အတွက် အတွင်းခံဘရာ လေးများပင် တွေ့မြင်နေရသည်။ “အား .. မောင်ရေ စိုကုန်ဘီကွာ ထီးပြန်ပေးလို့ဆို၊ မစတော့ဘူး တစ်ကယ်စိုကုန်ဘီကွာ ငိုမှာနော်´´ မ သူ့နောက်သို့ပြေးလိုက်၍ ထီးကိုလုသည် သူကလွတ်အောင်ပြေး၍ တိုက်ခန်းလှေကားတွင်စောင့်နေ၏၊ သူမ ခြေကို စောင့်၍ လှေကားတံစက်မြိတ်သို့ဝင်လာတော့သည်၊ ပါးစပ်မှလည်း သူ့ကိုတတွတ်တွတ်ဖြင့် ကျိမ်ဆဲလာ၏၊ တစ်ကိုယ်လုံး ရွှဲရွှဲစို နေသဖြင့် အကြိုအကြားများအထိကပ်ဝင်နေသည့် စပန့်သားပျော့ပျော့က။
သူမ၏ ခန္ဒာကိုယ်အလှ ကြွကြွရွရွများ အားဖုံးကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိကြတော့ပါ ၊ပွေ့ဖက်နမ်းရှုံ့ခဲ့စဉ်များတွင် သူစမ်းမိခဲ့သမျှ ဘရာထူထူမ၀တ်တတ်သော တစ်လုံးစီသီးခြား ဖြစ်နေသည့် မ ၏ရေစိုရင် သားမို့ မို့များ၊ ခန္ဒာကိုယ် လုံး၍ပြည့်သော ကြောင့် အတန်ငယ်ဝသည်ဟုထင်ရသော်လည်း ချပ်ရပ်၍ ချက်ပေါက်ရာ အ ချိုင့်လေးအထိမြင်တွေ့နေရသည့် ဗိုက်သားနုနုများ၊ ၁၀ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက ထမီကိုသာစွဲစွဲမြဲမြဲဝတ်ခဲ့ပါသည် ဟုဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း ပြည့်တင်းသောခန္ဒာကိုယ်နှင့်အချိုးညီစွာ သေးကျဉ်းနေသည့်ခါး ဌင်းနှင့်တစ်ဆက်တည်းတွင် အစ ၌ပြေပြစ်သယောင်ရှိသော်လည်း အောက်သို့လုံး၍ ကားသွားသည့် သူ့အကြိုက် တင်သားထွားထွားတို့ဖြင့် မြင်မ ကောင်းလောက်အောင်လှနေတော့သည်။ “ကဲ .. ဘယ်လိုလဲ ခုမှ လှသွားတာမဟုတ်လား´´ သူကရေစိုနေသောမျက်မှန်ကိုသုတ်ရင်းမေးလိုက်သည်။ သူခနဲ့တဲ့တဲ့ဆိုတော့ မကသူ့ရင်ဘတ်ကို လက်ဖ၀ါးနှစ်ဖက်ဖြင့် တစ်ဗျန်းဗျန်းရိုက်လေတော့သည်။
နာသည်မဟုတ်သော် လည်းသူ နာချင်ယောင်ဆောင်၍ လက်လေးများကိုဖမ်းကိုင်ကာ တစ်ကိုယ်လုံးသိမ်းကြုံး၍ ဆွဲဖက်ပြစ်လိုက်၏၊ သူ့ရင် ဘတ်ကျယ်ကျယ်တွင် မ ၏ လုံး၍စူနေသည့် အိစက်စက်ရွှေရင်နှစ်မွှာမှာ ပိပြား၍ကပ်သွားတော့သည်။`အို့ .. ဟိတ် .. မောင် .. လူတွေမြင်ကုန်မယ် လွှတ်ပါကွယ်´ မျက်နှာလေးငယ်၍ တောင်းပန်နေသည့်အတွက် သူနှမြောစွာလွှတ်ပေးလိုက်ရသည်၊ အမှန်ဆို လှေကားရင်းကမှောင်နေ ပါသည်၊ မကသူ့ရင်မှရုန်းထွက်၍ လှေကားပေါ်သို့ဦးဆောင်တက်သွားတော့သည်၊ သူကနောက်မှကပ်လိုက်သွား သော်လည်း လှေကားနှစ်ထစ်စာကြောနေသည့် မ၏နောက်ပိုင်းအလှက သူ့မျက်နှာရှေ့တွင် အနှောင်အတွယ်မဲ့စွာလှုပ် ခါနေတာ့၏၊ သူသိသလောက် အတွင်းခံအား လိုအပ်သည့်နေရာကိုသာဖုံးသည့် ကြိုးတစ်ချောင်းဘောင်းဘီကိုသာ ၀တ် လေ့ရှိသော မ ၏ ရေစိုတင်သားအလှများက သူ့အမြင်အာရုံကိုအထွဋ် အထိပ်သို့ရောက်စေခဲ့သည်။
သူ့မျက်လုံးတွေ ဘယ်ဆီရောက်နေသည်ကို တံခါးသော့ဖွင့်ပီး သူ့ဘက်လှည့်လာသော မ ကတွေ့သွားဟန်တူပါသည်၊ နုတ်ခမ်းဒေါင့်လေးအနည်းငယ်ကွေးညွှတ်သွားသည်မှအပ ထူးခြားဟန်မပြဘဲ မသိကျိုးကျွန်ပြုကာ ၀င်သွားနှင့်၏။ သူအခန်းထဲ ၀င်လျှင်ဝင်ခြင်း တစ်နေ့ခင်းလုံး ပိတ်လှောင်ထားခဲ့ဟန်တူသော တိုက်ခန်း၏ ရနံ့နှင့် အနွေးဓါတ်ကိုရသည်၊ ထိုအနွေးဓါတ်က မိုးစိုထားသည့်သူ့အား အတန်ငယ်နွေးထွေးသွားစေသော်လည်း မ ဖွင့်လိုက်သည့် ၀ရန်တာတံခါးမှဝင် လာသည့် လေစိမ်းများကြောင့် ပြန်လည်အေးစိမ့်လာသဖြင့် ဆိုဖာပေါ်တွင် ကုပ်ကုပ်လေးထိုင်နေမိသည်။ “သိပ်ချမ်းနေလား .. မောင်အေးမှာစိုးလို့ အဲကွန်းမဖွင့်ဘဲ တံခါးဖွင့်လိုက်တာ၊ခနလေးစောင့် အ၀တ်လဲပီးပြန်လာခဲ့မယ် ချမ်းနေတယ်ဟုတ် .. ကော်ဖီဖျော်ခဲ့မယ်နော်´´ သူမေးဆက်ပြလိုက်သည်၊ အိမ်ရှေ့စားပွဲတွင် စာအုပ်များပြန့်ကျဲနေ၏၊ အားလုံးလိုလို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရိုက်နှိပ် ထားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာအုပ်အထူကြီးများဖြစ်၏။
တစ်အုပ်ကောက်ယူကြည့်လိုက်သည်၊ မိန်းမအင်္ဂါပုံ များ သားအိမ်ပုံများကို ဓါတ်ပုံများဖြင့်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည့်စာအုပ်ဖြစ်၏၊ မ ကအိုဂျီလိုင်းကိုယူထားသဖြင့် ထိုစာအုပ် များလေ့လာရပေလိမ့်မည်။ မ တစ်ယောက် စာသည်လောက်ဖတ်ရသည့်တိုင် သူ့လိုမျက်မှန်မတက်ရသေးပေ။ “ဟိတ်ကောင်လေး .. ဘာတွေလျောက်ကြည့်နေတာလဲ တစ်အားကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်နော် ဟွန့် .. မပြောချင်ဘူး´´ သူရယ်ကျဲကျဲဖြင့်စာအုပ်ကိုပိတ်သည်၊ မကသူ့ကော်ဖီခွက်ကို ကမ်းပေး၏၊ အိမ်နေဂါဝန် ခပ်ဖားဖားကိုဝတ် လာသည့် မ၏ ဟိုက်ကျသွားသည့် လည်ပင်းအဟ ကို ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်မိလိုက်သေးသည်၊ ခန္ဒာကိုယ်အငိုက်တွင် အနှောင် အတွယ်မဲ့စွာ ပုံကျလာသည့် ရွှေရင်နှစ်မွှာ၏အထက်ပိုင်းကို လည်ပင်းအဟိုက်မှ ကောင်းစွာမြင်လိုက်ရ၏။ သူမ ဘရာ ၀တ်မလာသည်မှာသေချာသည်။ သူ့ဘေးတွင် ဂါဝန်စလေးကို သိမ်ရင်းဝင်ထိုင်သည်၊ စပယ်ရနံ့ကိုရလိုက်၏။
မကသူမအတွက်ယူလာသည့် ကော်ဖီကိုတစ်ငုံသောက်လိုက်သည်၊ အကျီရင်ဘက်တွင် အသီးခေါင်းသေးသေးလေးနှစ်ခု အတန်ငယ် ချွန်ထွက် နေသည် ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဘရာပါမလာသည်ကိုထပ်မံအတည်ပြုနိုင်ခဲ့၏၊ မ သတိထားမိသွားပြန် သည်၊ ကော်ဖီခွက်ကိုချ၍ မလုံလဲစွာလက်ကို ပိုက်လိုက်သည်၊ ပြီးမှမျက်စောင်းချိုချိုလေးဖြင့် … `ကဲ .. ကိုယ်တော်လေး .. ဒီနေ့ဘာဖြစ်နေလဲ ..ကော်ဖီမြန်မြန်သောက်ပီးပြန်တော့ နောက်ကျနေဘီ ဆက်နေရင် မတစ်ကိုယ်လုံး ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သင့်တော့မယ် မင်းရဲ့မှန်ဘီလူးကြီးကထွက်တဲ့ ဗို့အားတွေပျင်းလွန်းလို့´ မပြောလည်းပြော ခိုးခိုးခစ်ခစ်နှင့်ရီသည်၊ သူမရီသည့်အချိန် တွယ်ရာမဲ့ရင်နှစ်မွှာကသိမ့်သိမ့်ခါပြန်လေ၏၊ သူမျက်လုံး အစုံ ကိုမှိတ်လိုက်သည်။ ဘယ်ကထွက် နေသည့်အပူရှိန်ကြောင့်လဲမသိ သူ့ရေစိုအ၀တ်များ ခြောက်သွေ့ ချင်ချင်ဖြစ် နေသည် ။ချွေးစို့ချင်သလိုလိုဖြစ်လာ၏၊မွန်းကြပ်မှုများအားဖွင့်ထုတ်လိုက်ချင်သည်၊ကြာရင်ခက်တော့မည်။
မောင်ပြန်လိုက်တော့မယ် မရယ် သူသက်ပြင်းကိုချသည်၊ ပြီးတော့မက်တပ်ထရပ်လိုက်၏။မ ပြုံးပြီးကြည့်နေရာမှ သူ့လက်ကို ဖမ်းဆုပ်လိုက်သည်၊ သာသာလေးပေမယ့် နုညံ့နွေး ထွေးလှစွာသော လက်အစုံ၏ ဆုပ်ကိုင်မှုကိုရုန်းရန်အင်အား တစ်ကယ်ကိုမရှိခဲ့ပါ၊ သူပြန်ထိုင်လိုက်သည်။ “နေပါအုံး မောင်ရဲ့ .. မောင့်ရဲ့ဝန်ဆောင်ခတွေ ယူမသွားတော့ဘူးလား .. ကဲ ´´ မ ကပြောပြောဆိုဆို သူ့ပေါင်ပေါ် သို့ကိုယ် တစ်စောင်းထိုင်ချလိုက်သည်၊ အောက်ခံပင်တီလေးဝတ်မထားသည်ကိုပါ သူထပ်မံ၍ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိ လိုက်ရ၏၊ ဂါဝန်ပါးပါးတစ်ထပ်မှတစ်ပါး မည်သည့်ကာဆီးမှုမျှမရှိသော နုထွေးအိစက်လှသည့် မ၏တင်သားလုံးလုံး တို့က သူ့ပေါင်ပေါ်၌ အပြည့်အ၀နေရာယူလေတော့သည်။ နဂိုထဲက မာချင်ရက်လက်တို့ဖြစ်နေသော သူ့ဂွဆုံရှိ ခိုးလုခုလုအရာက အိစက်သာယာလှသည့်ဖိနှိပ်မှုကြောင့် စိတ်ထိန်း ထားသည့်တိုင် မရမက နိုးထရုံးကြွကာ။
မ၏တင်သားနှစ်ခြမ်းအကြားရှိလွတ်မြောက်နယ်မြေသို့ ကျကျနနကြီးပင် မိတ် ဆက်မိလေတော့သည်၊ မမျက်လုံးလေးအတန်ငယ်ဝိုင်းသွား၏၊ပြီးမှတစ်ချက်ပြုံးကာသူ့နှာခေါင်းကို ချစ်စနိုးဆွဲလိမ်သည်။ `လူဆိုးလေး မင်းခေါက်ထီးပါရဲ့သားနဲ့ဖွက်ထားတယ်´ ဟူသည့်မအပြောကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးခပ်အုပ်အုပ်ရယ် ဖြစ် ကြသည်၊ပြီးမှသူ့မျက်မှန်အား သာသာလေးချွတ်ပေးကာ နှဖူးကိုဖွဖွလေးနမ်း၏၊ “ဒါက မိုးစိုခံပီးကားလာမောင်းပေးတဲ့ အတွက်နော်´´ နားရွက်နားကပ်ခါပြောသည်၊ နုတ်ခမ်းသားနုနုတို့က နားရွက်ကိုကလူကျီစယ်သွားကြသဖြင့် သူကြက် သီးများထသွားသည်။ မ၏ ခန္ဒာဖြိုးဖြိုးလေးအား တစ်အားဖတ်ထားမိတော့၏၊စပယ် နံ့လေးကသင်းပျံ့၍နေသည်။ အတန်ကြာမှ မ က လူချင်းပြန်ခွာ၍ `ချမ်းချမ်းစီးစီးနဲ့ကားမောင်းပေးရတဲ့အတွက် ဒါလေးကိုယူနော်´ ဟုဆိုကာ နုတ် ခမ်းလေးစူ၍ မျက်လုံးမှိတ်ပေး၏၊ ပထမဦးစွာ ပန်းနုရောင်နုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးအား ငုံ၍စုပ်လိုက်သည်။
ပြီးမှပြူတစ်တစ်ဖြစ် လာသောလျှာလေးကို ရစ်ပတ်လိမ်စုပ်၍ အနမ်းရှည်ကြီးတစ်ရပ်ဆင်နွှဲပါလေတော့သည်။ အနမ်း၏ လှုံ့ဆော်မှုများကြောင့် ရင်ခုန်လှိက်မောကာ စိတ်ဆန္ဒများပြင်းပြလာသည်၊ လျှာတစ်ခုလုံးပါလာအောင်ဆွဲစုပ် လိုက်ချိန်များတွင် မ၏ရင်သားမို့မို့များကော့ကြွလာ၏၊ ထိုအခါ သူ့လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ထိန်းဖိကာ ခပ်ရွရွ ဆုပ်ကိုင် နယ်ချေ ပေးလိုက်မှ မ ကမျက်လုံးလေးမှေးစင်းကာ သက်ပြင်းလေးများခါခါချလေသည်။ ကျန်လက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကျောပြင်လေးအားပွတ်သပ်ပေးနေရာမှ ခါးကျဉ်းကျဉ်းလေးမှသည် ပေါင်ပေါ်တွင် လှုပ်ရွနေသည့် တင်သားစိုင်ကြီးတစ်ခြမ်းအား ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးဖိနယ်ပေးလိုက်ချိန်မှာတော့ မ မျက်လုံးလေးပွင့်လာသည်၊ ပီးမှ သူနုတ် ခမ်းအား ပြွတ်ခနဲမြည်အောင်စုတ်၍ ပါးစပ်ချင်းခွာလိုက်ပြီးသူ့ဆံပင်တိုတိုများကိုလက်ချောင်းများဖြင့်ထိုးဖွသည်။ ကဲကားမောင်းခကတော်လောက်ပီနော် .. အပြန်ချေကြွခကိုတော့မပေးနိုင်တော့ဘူး။
ပြန်ချင်ပြန်မပြန်ချင်နေ မောင့်သဘော… ဟုတိုးတိုးလေးပြောသည်၊ သူ့အပျော်များငယ်ထိပ်သို့တက်ဆောင့်၏၊ မ၏ရင်သားနှစ်ခြမ်းကြားတွင် ခေါင်းဖွက်၍ တင်းကြပ်စွာဖက်ထားလိုက်တော့သည်။ ရင်သားနှစ်ခြမ်းအကြားတွင် မျက်နှာဝှက်ထားရသည်မှာ အသက်ရှူရခက်ခဲသော်လည်း ထိုကဲ့သို့သော အိစက်ညက် ညောမှုမျိုးဖြင့် အသက်ရှူကြပ်သေမည်ဆိုက သေ၍ရလောက်သည်။ တပ်မက်မှုဇောကပ်နေသည့် လက်တို့ဖြင့် မ၏ရင် ဘက်ကြယ်သီးနှစ်လုံးအား ဖြုတ်ရန်ပြင်လိုက်စဉ် `မ´ က “ဟိုးထား .. ဆရာကြီး .. အ၀တ်တွေကစိုဖန့်ဖန့်နဲ့ ရေအရင်ချိုးလိုက်ပါအုံး ဖျားသွားလို့ မ ကိုချစ်ဖို့အားတွေနည်းသွား အုံးမယ်´´ သူ့လက်တုန်တုန်တို့ တွန့် ပြီး တန့်အသွား မ ကအပွေ့အဖက်မှရုန်းထွက်ပြီး ရေချိုးခန်းရှိရာ သူမ၏အခန်းသို့ခေါ်သွား၏။ သူမနောက်မှလိုက်သွားစဉ်တွန့်တွန့်လေးဖြင့်တုံနေသည့် တင်ပါးကြားညှပ်ဂါဝန်စလေးမှအရည်စိမ့်ကွက်လေးကို မြင်ဖြစ် အောင်မြင်လိုက်သေးသည်။
သူမ လာစပြုနေပြီ ….သူလဲလာစပြုနေ၏၊ သို့ပေမယ့်သူလာသည်က သူမလိုမဟုတ်ပဲအောက် ခံဘောင်းဘီ၏ချုပ်တည်းမှုကိုခံထားရသောကြောင့် တုတ်တုတ်ကြီးဖြင့်တိုနေရသည်။သူရေကိုစိမ်ပြေနပြေချိုးလိုက်သည်၊ အထူးသဖြင့် ဆရာသမားကို ဆပ်ပြာဖြင့်နာနာတိုက်နေမိ၏၊ သုံးနှစ်သုံးမိုး မချွတ် သည့်ချေး သူမ ကိုပြခါနီးမှ လှချင်နေမိသည်၊ ချိုင်းမွှေးများလဲနုတ်ချင်နေမိ၏၊ အချိန်လင့်သွားမည်စိုး၍ ဒီအတိုင်းထား လိုက်သည်။ “မောင်ရေ အအေးပတ်မယ်နော်´´ ဟူသည့် သူမ၏အသံကြားမှ လက်စသက်ခါ တဘတ်ခါးပတ်၍ ထွက်လာရတော့ သည် ၊ရေချိုးခန်းအပြင်ရောက်သော် မြင်ကွင်းက ၀င်သွားတုန်းကနှင့်မတူ ရုတ်ချည်းပြောင်းလဲသွား၏ အခန်းမီးကိုမှိတ် ခါခရမ်းရောင် နံရံမီး လေးများဖွင့်ထားသည်၊ သူမက ကုတ်ပေါ်တွင် ခြေဆင်းမှီထိုင်၍ ဖုန်းကိုကလိနေ၏။`မောင် ဘာဝတ်ရမလဲ´`ဘာမှမ၀တ်နဲ့ ..´ရေစိုဆံပင်များကိုတဘတ်ဖြင့်သုတ်ရင်းမေးလိုက်သောသူ့အမေး ကို မကပြုံးစိစိဖြင့်ဖြေသည်။
သူ့ခါးတွင်တဘတ်တစ် ထည်တော့ပတ်ထားသေး၏ အာ .. အဲ့ရေစိုတဘတ်ကြီး ကုတင်နားယူမလာနဲ့နော် မ ၏ ညုတုတုအပြောကြောင့်သူ စပ်ဖြဲဖြဲဖြစ်သွားသည်၊ခါးမှတဘတ်ကိုဖြေ၍ အ၀တ်တန်းပေါ်လွှားလိုက်သည်၊ မကနုတ် ခမ်းလေးဝိုင်းပြ၏၊ “ကဲ ခေါက်ထီးလေး ဘယ်မှာဖွက်ထားချင်သေးလဲ´´ မ ကဒီအချိန်အထိနောက်နိုင်သေးသည်၊ သူဟန်မဆောင်နိုင် တော့ .. ၊မ ပေါ်သို့ တက်ခွကာနမ်းတော့သည် ၊နုတ်ခမ်း ဖျော့ဖျော့များ ပန်းဆီရောင်သန်းအောင် ဆွဲစုပ်ပြစ်၏၊ မ ကသူ့လည်ဂုတ်ကိုသိုင်းဖက်ခိုကာ အနမ်းများကိုတုန့်ပြန်သည်။ နှစ်ဦးလုံး ချစ်စိတ်တက်ခါအသက်ရှုသံများပြင်းလာသည်။ သူတဆင့်တိုးကာ မ၏ရွှေရင်ဖြိုးဖြိုး ကိုဂါဝန်အကျီပေါ်မှညစ်၍ နယ်သည်၊ ချွန်ထွက်လာသည့်အသီးခေါင်းလေးနှစ်ခုအား နုတ်ခမ်းဖြင့်ညှပ်ဆွဲ၏၊ သူမ၏ဆီးစပ်တွင်ဖိ၍ထောက်ထားသည့် ဆရာသမားကလည်းလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီးနိုးထလာပြီး။
တွင်းအောင်းသတ္တ၀ါဖြစ်သည့်အားလျှော်စွာ သင့်လျှော်ရာ နေရာအား တိုးထွန့်လူးလွန့်၍ ရှာနေတော့သည်။ သင့်လျှော်ရာဖြစ်သည့် မ၏ အင်္ဂါစပ်မှာလည်း အမြှောင်းလိုက်ဖောင်းထလာကာ တွင်းစာအား ကြွရွှ၍ မြူနေသဖြင့်နှစ်ဦး အကြား ခြားနားထားသည့်ဂါဝန်ပါးမှာ ဗီလိန်သဖွယ်ဖြစ်နေတော့သည်။`မောင် .. အဲဒီဂါဝန်ကို ချွတ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးလား´ မနုတ်ခမ်းလေးကိုက်ခါဆိုသည်၊ဟုတ်ပေသည်၊သည်ဂါဝန်က ကိန္နရီချောင်းခြားသကဲ့သို့ သူတို့နှစ်ဦးအကြား ကန့်လန့် တိုက်နေ၏၊ ပေါင်လည်အထိလိပ်တက်နေသောဂါဝန်အား သူအလောတကြီးလှန်တင်မိသည်၊ခါးနေရာတွင်တန့်သွား၏ သိပ်ကိုလှပသည့် မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုခံစားလိုက်ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မ၏ ဆီးခုံလေးသည် ဖွေးအုနေပြီး အမွှေးအမြှင်များအား ပုံမှန်ရိပ်သည့်အတွက် စိမ်းဖန့်ဖန့်လေးဖြစ်နေကာ ဌင်း၏ အောက်ခြေရှိ အကွဲကြောင်းလေးက မို့မောက်၍ ခုံးထနေ၏၊ သူဆီးခုံလေးအားတစ်ချက်နမ်းလိုက်သည်။
မ တွန့်ခနဲဖြစ် သွား၏၊ ကြက်သီးဖုလေးများထသွားသည်ကိုသတိထားမိလိုက်သည် မ ၏မျက်နှာကိုမော့ကြည့်လိုက်တော့ သူဘာဆက်လုပ်မည်ကို ရင်ခုန်လှိုက်မောစွာ လိုလားတောင့်တစွာ စောင့်ကြည့်နေ ဟန်တူသည်၊ မ သည်အတွေ့အကြုံရှိပြီးဖြစ်မှန်း သူသိပါ၏၊ ဌင်းကိစ္စများနှင့်ပတ်သတ်၍ သူတို့နှစ်ဦးစလုံး၏ ရှိခဲ့ဖူး သည့်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည့် အဖြစ်သနစ်များအားလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရင်ဖွင့်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါသည်၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ သူပြောခဲ့သည့် အတိုင်း ခြေမလေးကုပ်သည်အထိ သူတာဝန်ကျေရပေအုံးမည်။ ပထမဦးစွာ မ၏ပေါင်တံဖွေးဖွေးနှစ်ဖက်အား သူ့ပခုံးတွင်တင်လိုက်သည်၊မ ကခါးလည်တွင်ချွတ်ရန်ကျန်နေသည့် ဂါဝန် အား ကိုယ်တိုင်ဆွဲချွတ်၍ ခုတင်ချေရင်းသို့ပစ်လိုက်၏၊ သူမ၏ ရင်သားဖွေးဖွေးနှစ်ခိုင်အားလက်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီဖြင့် ပင့်တင်ကိုင်ဆုတ်ထားရင်း ချစ်သူ၏အပြုအစုကို ငံ့လင့်၍နေသည်၊ ဌင်းကိစ္စကိုသူမ စွဲမက်လှသည်ဟုပြောဖူး၏။
စိကပ်၍အရည်အနည်းငယ်စို့နေသည့် သူမ၏အကွဲကြောင်းဖောင်းဖောင်းကြီးနှစ်ခုအား လက်ဖြင့်အနည်းငယ်ဖြဲလိုက် သည်၊ အတွင်းသားရဲရဲလေးများတွင် အင်အားပြင်းစွာလောင်မြိုက်ပေါက်ကွဲထွက်နိုင်သည့် စနက်တံနီနီလေးက ငြိမ်သက် ၍ကပ်နေ၏၊ ထိုနေရာအားသူတစ်ချက်နမ်းလိုက်သည်၊မ တွန့်ခနဲဖြစ်သွား၏၊နောက်သူလျှာဖြင့်ပင့်တင်လျက်လိုက်သည်။ မ ပါးစပ်လေးဟသွား၏၊ မျက်လုံးများမှိတ်ထား၏၊လျာဖြင့်ထပ်မံ၍ အထက်အောက် ခပ်သွက်သွက်လေးလျက်သည်။ “ဟင့် .. အာ .. အင်းး .. အို့´´ အစရှိသည့်ညင်းသံသဲသဲလေးများထွက်လာတော့သည်၊ ထို့နောက် တစ်ဆင့်တက်၍ အတွင်းနုတ်ခမ်းသားရဲရဲနှစ်ဖက်အားတစ်လှည့်စီ စုတ်လျက် အ၀အာအာလေးအားအပြားလိုက်လျက် နုတ်ခမ်းများဖြင့် စုဆွဲစုတ် အတွင်းနုခမ်းသားကပ်ကပ်လေးနှစ်ဖက်အား အားကုန်စုတ်၍ခေါင်းရမ်းလိုက်ချိန်မှာတော့ မ၏ဖင်သားကြီးများ ကော့တက်လာကာ သူ့ဆံပင်တွေကိုလက်ချောင်းများဖြင့်ထိုးမွှချေတော့သည်။
ရှီး .. အာ့ .. ကောင်းလိုက်တာမောင်ရယ် .. အာ့ဟာ .. အင်း ကြိုက်တယ် .. မောင့် .. အိုး… မက သူ့မျက်နှာကို အတင်းဆွဲကပ်၍ ကာမဒီရေများတစ်လိပ်လိပ်တက်ခါ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ညင်းနေတော့သည်။ သူ အရည်ကြည်များကလည်း စအိုဝစူစူလေးအထိစီးကျလာတော့သည်။ အရည်မျာအိုင်လာသောအ၀အာအာလေးထဲသို့ လျှာကိုလိပ်သွင်း၍ မွှေလိုက်ချိန်များတွင် သူမတစ်ဇန့်ဇန့်ဖြစ်ခါ လုံးဝန်းသည့်နို့အုံများကိုညစ်ချေလေတော့သည်။ သူက လျှာကိုအထက်သို့ပင့်တင်၍ စနက်တံနီတာရဲအားပင့်ပင့်ဆွရာ မခေါင်းများဘယ်ညာရမ်း၍ တစ်အားအားဖြင့်အော်လေ တော့သည် ။နောက်ဆုံး တင်းလာသည့်ထိုအကြောထုံးလေးအား အပေါ်အောက်နုတ်ခမ်းဖြင့်ဆွဲညှပ်၍ နို့စို့သကဲ့သို့ တစ် ပြွတ်ပြွတ် မြည်အောင်စို့ပေးလိုက်ရာ မတစ်ယောက် အသံပင်မထွက်နိုင်တော့ဘဲ အံကြိတ်၍ တုံတုံတက်ကာ သူ့ခေါင်း အား ပေါင်တံအိအိကြီးမျာဖြင့်အတင်းညှပ် ကော့ကလန်ထိုး၍ ပြီးသွားလေတော့သည်။
ခနငြိမ်သွားပြီး သူ့အားအတင်းဆွဲတင်ကာ အရည်များပေလျက်ရှိသည့်သူ့နုတ်ခမ်းကိုပြောင်စင်အောင် နမ်းစုပ်ရက်၍ အ တင်းဖက်ထားသည်။ “သိပ်ချစ်တာပဲလားမောင်ရယ် .. မလည်းချစ်မယ်နော် .. မပါးစပ်ထဲမှာပြီးချင်တယ်မှတ်လား .. မောင့်ခေါက်ထီးလေး ကိုစုတ်ပေးမယ်နော်´´ မကပြောပြောဆိုဆို ဘေးတွင်တစ်စောင်းဝမ်းလျားမှောက်၍ ဆရာဂေါင်အားစနမ်းပါတော့သည်။ ထိပ်တွင်အရည်အ နည်းငယ်စို့နေသော ဆရာအား အရည်ခွံမလှန်ဘဲ တစ်ချောင်းလုံးငုံလိုက်၏၊ အာငွေ့ကြောင့်နွေးခနဲဖြစ်သွားသည်။ပြီး မှအရည်ခွံအားလျှာဖြင့်ထိုးထုတ်ခါ ပေါ်လာသည့် ကွမ်းသီးခေါင်းနီတာရဲအားတပြွတ်ပြွတ်ဖြင့်စုတ်ပါတော့သည်၊ ကနဦး ပြော့ချင်ချင်ဖြစ်သောငနဲမှာ စုတ်အားကြောင့် လေထိုးလိုက်သည့်နှယ်ဖောင်းတင်းကားထွက်လာကာ အီဆိမ့်တက် လာ သည်။ မ၏ပါးစပ်အတွင်းပြည့်သိပ်လာသော ငနဲအား လက်တစ်ဘက်ဖြင့်ထိန်းကိုင်၍ သွားဖွေးဖွေးဖြင့်ခြစ်သည်။
သူ အာ့..အာ့ဖြင့် ကျင်တက်သွား၏ ၊ဒါကိုမက မော့ကြည့်ပြီးသဘောကျစွာခစ်ခစ်ဖြင့်ရီသည် ။နောက် အငိုက်ဖမ်း၍ တစ်ချောင်းလုံးကိုမြိုချ သည် အာခေါင်ထဲရောက်သွားသည့်ထိပ်ဝတစ်ခုလုံးအီဆိမ့်တက်သွားသည်၊ မ၏ဆံပင်များအား ဆွဲကိုင်၍ ကော့ထိုးမိ သည် ။ပြီးတော့ အွပ်အွပ်ဖြင့် ပြန်ထုပ်၏၊ အာခေါင်၏ကန်အားကထိပ်ဝကိုညှစ်ညှစ်ထုပ်သည့်အတွက် ပြီးချင်ချင်ဖြစ်သွား ၍ အောင့်ထားလိုက်ရသည်။ ထို့နောက်တစ်ချောင်းလုံးပါးစပ်ကထုတ်၍ လက်ဖြင့်ဆုပ်ကိုပြီး အတန်ငယ်တွဲနေသော ငုံးဥနှစ်လုံးအား မှိန်ယှက်စွာငုံ ၍ သုံးဆောင်ပါတော့သည်။ ငုံယုံမက လျှာဖြင့်ပါ ငုံလျှက် ထိုးမွှေကလိပြီး ပါးစပ်ထဲတွင်မွှေနှောက်ကစားကာ လက်ကခပ် ပြင်းပြင်း ဂွင်းတိုက်သည့်အတွက် ထိမ်းမနိုင်သိမ်းမရတွေဖြစ်ကုန်သည် ။ကော့ကလန်တက်လာသောသူ့အား လက်ဖ၀ါးနုနုဖြင့်ပွတ်သပ်၍ ထိပ်ဖြားကိုငုံကာ မေးသိုင်းကြိုးနေရာအားလျှာဖြင့် ခပ် သွက်သွက်လေး ကစားသည့်အခါတွင်တော့။
တစ်ချောင်းလုံး ဆိမ့်အီကျင်တက်လာကာ သုတ်ရည်များတဗြစ်ဗြစ်ဖြင့်ပန်း ထွက်ကုန်တော့သည်၊ ဒါကို မက တစ်စက်မကျန်လေလွင့်မခံဘဲအာခေါင်ထဲအကုန်လျာဖြင့်လိပ်၍မြိုချကာ ငုံစုပ်ထား လိုက်သဖြင့် မ ပါးစပ်ထဲတွင် တစ်ဇန့်ဇန့်ဖြင့်အရှိန်မသေနိုင်မျက်ဖြူဆိုက်နေရသည် ။ပြီးမှ ပြွတ်ခနဲနေအောင်စွဲစုတ်၍ သူ့ ကိုသိုင်းဖက်ကာညိမ်နေသည်။ တစ်လှည့်စီ ဆန္ဒပြီးမြောက်သွားသည့်တိုင် ပင်မကိစ္စမရောက်သေးသည့်အတွက် အ၀တ်မပါ ခန္ဒာများကိုထပ်လျက် ပွတ် သပ်မှိန်းကာ အားယူနေတော့သည်။ မ သည်ဌင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍၀ါသနာကြီးသူဟု မဆိုသာသော်လည်း ခုံမင်သည့်အထဲတွင်ပါသည်ဟုပြော၍ ရသည်။ သူ့အားပြုစုသွားသည့် စကေး က မနိမ့်လှပေ၊ ယောက်ျားကြီးတန်မဲ့ အိပ်ယာခင်းများအား ဆွဲလိမ် မိသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ ရသည်။ သူတို့နှစ်ဦးနီးစပ်မှုရခဲ့ခြင်းသည်လည်း ဌင်းကိစ္စ နှင့်မကင်းခဲ့ချေ၊ ရင်းနှီးမှုရလာသည်နှင့် သားဖွားမီးယပ် ပိုင်း ဆိုင်ရာ ဆေးပညာများ။
နောက်ဆုံးပေါ်ဆေးပစည်းများ ကို လူချင်းတွေ့၍တစ်မျိုး ၊ဖုန်းဖြင့်တစ်သွယ် ဆွေးနွေးမေး မြန်း အသိချင်းဖလှယ်ကြရာမှ ရင်းနှီးမှု၊ ပွင့်လင်းမှု၊သာယာမှုများရလာကာ ယခုအခြေအနေအထိတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ချင်းဖြစ် ပေသည်။ မ က အတန်ငယ်ပျော့နေသည့် ကောင်လေးအား လက်ဖြင့်ညှစ်ဆော့နေရာမှ အရည်ပြားကို ကျကျနနလှန်ချလိုက်ခါ ပေါ်လာသည့် ခေါင်းတုံးပြောင်ပြောင်ကို နုတ်ခမ်းဖြင့်ငုံညှပ်၍ ပြွတ်ခနဲမြည်သည်အထိ အားရပါးရဆွဲစုပ်လိုက်သည်။ ပထမတစ်ချီတွင်လုံ့လစိုက်ထုတ်စရာမလိုပဲ နုညံ့သည့်လျှာ၏အစွမ်းဖြင့် ပီးထား၍လားမသိ အားကုန်ခြင်းမရှိဘဲငေ့ါငေ့ါ၍ ထောင် ထလာသည်၊ အရည်ပြားကိုအကုန်လှန်တင်ထားသဖြင့် ထိပ်သည်ဂျာမန်သံခမောက်ကဲ့သို့ ကားထွက်နေ၏။ ဌင်း ကို မ ကမက်မောစွာတစ်ချက်နမ်းလိုက်ပီး မေးသိုင်းကြိုး၊ ဆီးပေါက်၊ ထိပ်သားနုနုနှင့် ဇောင်းသားမြောင်းသားများပါမ ကျန် လျှာချွန်လေးဖြင့် တို့ထိ လျှက်ဆွဲလေရာ။
အကြောများအပြိုင်းပြိုင်းထလာသည်အထိ ထောင်မတ်လာတော့သည်…. ကုန်းလျက်နေသည့် မ မျက်နှာလေးအား ဆွဲယူလိုက်ပြီး နုတ်ခမ်းလေးများအား အကျင်နာပေးလိုက်သေး၏၊ ပြီးမှ ကု တင်တွင်လှဲသိပ်လိုက်ပီး ပေါင်တံနှစ်ချောင်းအား ဖင်သားဖွေးဖွေးကြီးမော့လာသည်အထိ ဆွဲထောင်ဖြဲကားလိုက်ကာ မပွင့်တပွင့်အာနေသည့် အသားညှပ်မုန့် ဖွေးဖောင်းဖောင်းကြီးကိုတေ့ထောက်ထားလိုက်တော့သည်။ မ ကမျက်နှာလေးမော့၍ သူ့လည်ဂုတ်ကို လက်နှစ်ဖက်ယှက်တင်၍ ဆွဲခို၏ ၊မြန်မြန်ထည့်လိုက်တော့ဟူသည့်သဘော၊ သူက ဗလာကျင်းနေသည့် မ နို့အုံ ၀ိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုအား လက်ဖြင့် စုံညှစ်ကိုင်အားယူကာ ဖိချလိုက်သည်၊ပထမတစ်ချီ ပီး ထားသည့် အရည်လက်ကျန်များမခြောက်သေးသော မ၏ အတွင်းသားစိုစိုများကြားသို့ ခေါင်းတစ်ခုလုံး ပတစ်ခနဲဝင် သွားသည် ။ထောင်ဖြဲထားသည့် မ၏ ပေါင်တံများအား ပခုံးပေါ်ဆွဲတင်လိုက်ပြီး ဆက်လက်၍ ကျန်ရှိနေသည်များအား ခပ်နှဲ့နှဲ့လေး ဖိ ဖိသွင်းလိုက်ရာ။
စွတ်စိုအိထွေးနေသည့် အတွင်းပိုင်းထိ တစ်ရစ်ရစ်ဖြင့်တိုးဝင်သွားပြီးဆီးခုံခြင်းမိတ်ဆက်မိသည်။ မ ခေါင်း လေးပိုမော့သွား၏၊ မျက်ခုံးများရှုံ့ထားသော်လည်း ပါးစပ်ကလေးဟလိုက်ခြင်းက ၀င်ဝင်ခြင်းနာကောင်းကလေး ကောင်း သွားသည်ဟူသည့် အဓိပါယ်ပင်ဖြစ်သည်။ အတွင်းသားရွရွများ၏ ရှုံ့ပွဆွဲညှစ်မှုကြောင့် အရသာလိုက်လာကာ ခေါင်းပေါ်သည်အထိ တစ်ဆုံးဝင်တစ်ဆုံးထွက် ပုံမှန် ကလေး ညှောင့်နေမိသည်၊ ပေါင်ကိုပခုံးတွင်ထမ်းထားသဖြင့် မ၏မုန့်ပေါင်းဖွေးဖွေးကြီးက အလိုက်သင့်ဦးမော့ကာအ၀င် အထွက်ကို အဆင်ပြေ စေ၏ ၊ နို့ကိုညှစ်နယ်နေရာမှ ခုတင်မှကြွရွကော့တက်လာသည့် တင်ပါးဆုံဖွေးဖွေးကြီးအား ထိမ်းကိုင်၍ အရှိန်အနည်း ငယ်မြှင့်ကြည့်သည်၊ အရည်လိုက်လာသည့်အတွက် အ၀င်အထွက်ကောင်းလာ သည်၊ ကနဦးစနောက်နေ နိုင်သေးသည့် မ က အခုစကားပင်မပြောနိုင်ပဲ သူ့အ၀င်အထွက်များအား ပင့်ပင့်ကော့ခံလာ သည့် အတွက် သူထပ်မံ၍ အရှိန်နှင့် ပြင်းအားကိုတင်ကာ ဖိဖိ၍ ဆောင့်တော့သည်။
အင့် .. အင့် .. အာ့ .. ဟုတ်ပီ .. မောင် .. ဆောင့် .. အင့် .. ဆောင့်ကွာ .. အီးး …. ဆီးခုံချင်းရိုက်မိသည့် ဖတ် ဖတ် ဖတ် ဟူသည့်အသံ၊ တွဲသည့်ဥနှစ်လုံးနှင့် ဖင်ဝတို့ရိုက်မိသည့် ဖလုတ် ဖလုတ် ဖလုတ် ဟူသည့်အသံ၊ ထမ်းထားသောပေါင်နှင့်ရင်ဘက်တို့ရိုက်မိသည့် ဘတ် ဘတ် ဘတ် ဟူသည့်အသံ၊ အားဖြင့်ဆောင့်ချ လိုက်တိုင်း ကော့ခံနေသည့်မ၏ခါးနှင့်ထိခတ်မိသည့်စပရင်မွေ့ယာ၏ တကျိကျိအသံများနှင့်အတူ ကာ မဒီရေ ၀ုန်းခနဲ ဆောင့်အတက် မှိန်ယှက်စွာအော်ညည်းသည့် မ၏ အသံတို့က စီးချက်ညီစွာထွက်လာ၏။ သူတို့နှစ်ဦး၏ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မို့ အိဒြေဆယ်ကာအောင့်အီးထားသမျှ ဆောင့်ချက်ကောင်းလွန်းသဖြင့် ဟန်မဆောင် နိုင်တော့ပဲ ဖိဖိဆောင့်လိုက်တိုင်းဝိုင်းဝိုင်း၍ယမ်းခါသွားသည့်ရင်သားဖွေးဖွေးကိုစုံညစ်ကာအားရအောင်အော်တော့သည်၊ အော်လေ ဆောင့်ရသူမှာ အားတက်လေဖြစ်သည့်အတွက် ဖင်သားအယ်အယ်ကြီးများကို စုံဆွဲဖြဲ၍ ကော့ကော့ထည့်နေ မိသည်။
မ….မှာကောင်းလွန်း၍ တုံတုံတက်လာသဖြင့် ရုတ်တရက်အဆောင့်ရပ်၍ အကွဲကြောင်းထဲမှ ငေ့ါငေ့ါလေးထောင်ထ နေသည့် စနစ်တံလေးကို ငုံ၍ဖိစုပ်ထားပေးလိုက်ရာ မမှာမွေးယာကိုလက်ဖြင့်တစ်ဗုန်းဗုန်းရိုက်၍ မျက်ဖြူဆိုက်ကာ ကော့ထိုးလန်ထွက်ပီးသွားတော့၏။ အရည်များပွက်အံကျလာကာပွစိပွစိဖြစ်နေသည့် မ၏ အောက်နုတ်ခမ်းမှခွာ၍ မောဟိုက်တုံရင်ကာ ဟစိဟစိဖြစ်နေ သည့်အပေါ်နုတ်ခမ်းသို့ စုပ်နမ်းလိုက်သည်။`မောင် .. အရမ်းဆိုးတယ်ကွာ.. မ မျက်ဖြူတောင်ဆိုက်တယ် ´`ချစ်တာကိုး .. မရဲ့ .. ခြေမကုပ်ယုံတင်မကဘူး ..မျက်ဖြူတောင်ဆိုက်တယ်မှတ်လား .. ဟိဟိ´နှာဘူးကြီး .. ကဲလာ ..မအလှည့် .. မင်းလဲမျက်ဖြူဆိုက်သွားစေ့မယ် မက သူ့ကိုဆွဲလှဲ၍ထောင်နေသည့် ညီလေးကိုကိုင်ကာ တေ့၍ထိုင်ချလိုက်သည်။ အရည်များရွဲနေ၍ဗလွတ်ခနဲဝင်သွား၏ “အင့် .. ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ မရဲ့´`ဟင့် အင်း မရတော့ဘူး နှာဘူးတစ်အားထနေဘီ မလဲ´ သူတို့ခပ်အုပ်အုပ်ရယ်ဖြစ်သည်။
အသင့်အနေအထားပြင်ပြီးသည်နှင့်စဆောင့်တော့၏၊ မ မြင်းစီးပုံကအဆန်းဖြစ်သည် သူ တစ်ခါမျှမတွေ့ဖူးပေ၊ ထောင်ထားသည့်သူ့ပေါင်များကို သူမကမှီထိုင်ထားပီး အင်္ဂါစပ်နှစ်ခုအားတပ်ရက်ထိုင်ထားကာ ပေါင်ကိုစိလျှက် ခြေဖ၀ါးနှစ်ခုအား သူ့ရင်အုံပေါ်သို့နင်း၍ပွတ်ခြင်းဖြစ်သည် ။ကျောမှီအားဖြင့် ဖင်ကိုစကောဝိုင်းမွှေ့ဆောင့် သကဲ့သို့ သူ၏ယောက်ျားနို့စူတူတူကိုလည်း ခြေဖ၀ါးဖြင့်ပွတ်ဆွသောကြောင့် အရသာကောင်းလှသည်။ ပူး၍စေ့ထားသည့် အင်္ဂါဇတ် စီးထွေးထွေး၏ ပျင်းထန်စွာ မွှေ့ဆောင့်အားကြောင့် အတော်ပင် ဆိမ့်အီတက်လာကာ အောင့်မထားနိုင်တော့ပဲ မေးကြောများတင်းလာသည်အထိ အရသာတွေ့လာသည်၊ သူ့အခြေအနေကိုကြည့်၍ မက အနေအထားချက်ချင်းပြင်လိုက်သည် ။ခြေနှစ်ချောင်းကိုရင်ဘက်မှပြန်ချ၍ ဖင်ကိုပစ်ခါးကိုကော့ကာ တစ်ဗျောင်းဗျောင်းဖြင့် ဆောင့်တော့သည်၊ သူမအံကို ကျိတ်၍ ခေါင်းကိုမော့ထား၏။
အကြွအဆောင့်တွင် ယမ်းခါဝဲသွားသည့် ဆံပင်များ အိတုံဝိုင်းတက်သွားသည့်ရင်သားဖွေး ဖွေးများ ကား၍တစ်ဗျောင်းဗျောင်းမြည်အောင်ဆောင့်ဆောင့်ချလာသည့် တင်သားကားကားတို့ကိုကြည့်၍ ဆိမ့်အီတက် လာကာ သူမ၏အတွင်းနံရံများအားတစ်ဗျန်းဗျန်းဖြင့်ပန်းထုတ်လိုက်တော့သည် ကာမအရသာ၏ ချိုမိန်အီဆိမ့်ခြင်းကို နှစ်ဦးသားပွေ့ဖက်ပွတ်သပ်ခြင်းဖြင့် မှိန်းမောအားယူပြီးနောက် နွမ်းလျှစွာအိပ်ပျော် သွားတော့သည်။ အိပ်ပျော်သွားသည့်တိုင် သူ့အားမက်မောစွာပွေ့ပိုက်၍ နုတ်ခမ်းထောင့်စွန်းလေးကွေးရုံပြုံးနေသည့် မ၏မျက်နှာသည် တစ်ကိုယ်ရည် အထီးကျန်မှုများမှ ခနတာသက်သာရာရသွားဟန်တူ၏၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကျေနပ်ပါ သည်၊ မ ကိုသူသိပ်ချစ်သည်၊ သူ့ဘက်ကပေါပေါလောလော ပေးဆပ်နိုင်သည့် အကျင်နာများဖြင့် မဘ၀လေးကိုတတ် နိုင်သရွေ့ဖြည့်ဆည်းပေးရန်ဆုံးဖြတ်မိသည်။ထိုနေ့ညမှစ၍ အားလပ်ရက်ညတိုင်းလိုလို သူ့ဘေးတွင် မ၏ကိုယ်ငွေ့နွေးနွေးလေးရှိနေတတ်လေတော့သည်……ပြီးပါပြီ။